omee, guitarist, Taylor Swift, onye na-ede egwú, onye ọbụ abụ
Taylor Alison Swift(* 13 December 1989) bụ onye na-agụ egwú American, onye na-ede egwú na onye na-ede egwú. Ọ tolitere na Wyomissing, Pennsylvania, ma kwaga Nashville, Tennessee, ebe ọ malitere ọrụ egwu ya dịka onye na-agụ egwú. O tinyere aka na nkwekọrịta onwe ya bụ Big Machine Records wee ghọọ onye na-ede akwụkwọ na nwata kachasị na Sony / ATV Music Publishing. Ugbua mgbe a tọhapụrụ ya album mbụ ya (Taylor Swift) na 2006 ghọrọ kpakpando nke mba. Onye nke atọ, "Our Song", mere ya ka ọ bụrụ ọbụ abụ nke kacha nta ka o dee abụ na-enweghị enyemaka ma wepụta abụ nke bu ụzọ na Billboard Hot Country Songs. A họpụtara ya maka Award Grammy na ụdịOnye Ọhụụ Ọhụrụ kacha mma(Best Artist ọhụrụ) na 2008.
Abụọ nke abụọ-adịghị atụ ụjọwepụtara na njedebe nke afọ 2008. Akwado site na ịga nke ọma nke kpọrọ "Ịhụnanya Story" na "Ị Nọ na Me" na chaatị dị iche iche a na album masịrị pop crossover na-ege ntị na ghọrọ nnukwu n'ire album nke afọ 2009. The album meriri Grammy Awards anọ na 2010, na-eme Swift onye na-eto eto Grammy na album "Album nke Year" album. Ya album nke atọKwuo Ugbu awepụtara na njedebe nke 2010 ma rere ihe karịrị otu nde nkeji n'izu mbụ nke mbipụta. Swift mgbe isi na iri na atọ n'ọnwa tour Gwa Ugbu a World Tour, ebe ọ rụrụ ọtụtụ stadiums na dọtara n'elu 1,6 nde Fans. Onye nke atọ "Pụtara" meriri Grammys abụọ. A na-akpọ akwụkwọ nke anọ nke Taylor SwiftRedma nyere 22. October 2012. Onye na-anya ụgbọelu "Ọ Dịbeghị Mgbe Anyị Na-alaghachi" wee bụrụ onye mbụ ya na-ebu ụzọ rute n'elu ọkwaGerman100 na-ekpo ọkụ. Njem Uhie nke North America malitere na March nke 2013. A tọhapụrụ album ọhụrụ nke Taylor na njedebe nke 1989 ma abụ egwu kachasị na album ahụ ghọrọ Shake It Off. O meriri Grammy na "Album of the Year" na "Best Vocal Album".
Taylor Swift a na-kọwara dị ka "America si n'obi" na mara maka songs na-abụ, ihe banyere ịhụnanya. Musically, ọ bụ na-emekarị a mfe ederede songs na catchy olu ụtọ, nke na-eme ka mmadụ fọrọ nke nta ozugbo dabara n'ime mmata (ie. Nko) Dị ka a songwriter e ọdịda nke Nashville Songwriters Association of mkpakọrịta na òtù Songwriters Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha. Ọzọ rụzuru gụnyere Taylor Swift iri Grammy Awards, isii American Music Awards, asaa Country Music Association Awards, isii Academy of Country Music Awards na iri na atọ ọtụtụ BMI Awards. N'ime ya ọrụ ọ na-ere n'elu 22 nde albums na 50 nde songs ebudatara online. Ke adianade ya egwú, Taylor Swift gbalịrị ọrụ nke omee pụtara na onye na nwunye nke CSI Las Vegas na 2009, na ntochi The St. Valentine (2010) na animated filmThe Lorax(2012).Forbeseme atụmatụ na o meela ọtụtụ nde dollar maka ọrụ ya site na 165. Maka 2013, 40 nwetara ọtụtụ nde dollar (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 789 nde okpueze), nke kachasị n'ime ụlọ ọrụ egwu.
A mụrụ Taylor Alison Swift 13. December 1989 na Ịgụ.Nna ya, bụ Scott Swift, bụ onye ndụmọdụ ego na Merrill Lynch.Ọ tolitere na Pennsylvania na ọ bụ nwa nke ọgbọ atọ nke ndị isi ego.Nne ya, Andrea Swift (nee Finlay), na-arụ ọrụ n'ụlọ ma na-arụ ọrụ dịka onye na-azụ ahịa nke ego ego.O jiri afọ iri mbụ nke ndụ ya na Singapore, mgbe ahụ ezinụlọ ya biri na Texas; nna ya bụ onye na-eji mmanụ ụgbọ ala ma na-arụ ọrụ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.A na-akpọ Taylor Swift mgbe ọ bụrụ abụ James Taylor; nne ya kwenyere na ya ga-enyere ya aka (Taylor) n'ịrụ ọrụ azụmahịa.Taylor kwuru, sị, "Mama chere na ọ ga-adị mma ka Taylor tinye kaadị azụmahịa n'ihi na onye na-agụrụ ya agaghị amata tupu ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị."O nwere nwanne nwoke nke tọrọ, Austin, onye gụrụ akwụkwọ na Mahadum Notre Dame,ma emesị gaa na Mahadum Vanderbilt.Taylor Swift ji obere obere osisi na-eto eto na Montgomery County wee gaa Ụlọ Akwụkwọ Wyndcroft akwụ ụgwọ.Mgbe Taylor afọ itoolu, ya na ezinụlọ ya kwagara Wyomissing, Pennsylvania, ebe Taylor gara ụlọ akwụkwọ elementrị na West Reading na Wyomissing Area High School Junior / Senior High School.O jiri ezumike ezumike nọrọ n'ụlọ ezumike nne na nna ya na Stone Harbor, New Jersey, nke na-akọwa ya dị ka ebe ebe ọtụtụ n'ime ncheta nwata ya bilitere.
Ihe omume mbụ nke Taylor na-agba ịnyịnya. Mama ya tinyere ya n'oche mgbe ọ dị afọ itoolu; O mechara merie n'egwuregwu ahụ.Ndị ezinụlọ ya nwere ọtụtụ ihe ndị American na ndị Shetland.Mgbe ọ dị afọ itoolu, Taylor tụgharịrị uche ya n'ebe ihe nkiri ihe nkiri na-eme na Berks Youth Theater Musical AcademyGriiz,Annie,Bye Bye BirdiekaOlu ụda.Ọ na-aga Broadway mgbe niile maka ịbụ abụ na ime ihe. Ma mgbe ọtụtụ afọ nke bankruptcy na New York mgbe ọ na-enweghị ihe ọ bụla, Swift malitere ịchọta egwu mba.Kemgbe ahụ, ọ na-eme ememe izu ụka ya n'ememme, eme, cafes, asọmpi karaoke, ụlọ klọb, ndị na-egwu egwuregwu na ụlọ ọgwụ.N'afọ iri na otu mgbe ọtụtụ mbọSwift ndibọhọ a local talent zoo, ebe ọ bụrụ abụ abụ "Big Deal" by LeAnn Rimes ma merie a ohere na-egosi dị ka ndị mbụ mee ihe Charlie Daniels na ọgbọ egwuregwu na Strausstown.N'ihi ọchịchọ ya na-eto eto na egwu mba, ọ malitere ịhapụ onwe ya n'aka ụmụ klas ya.
Mgbe ikiri ihe merenụBehind Musicbanyere Faith Hill, Swift kweere na "e nwere mba kpakpando a na-akpọ Nashville, ebe nrọ na-agbanwe na ebe ọ ga-aga."Ya na nne ya gara Nashville maka oge ezumike mmiri, ebe o mere ngosi nke Dolly Parton na Dixie Chicks dị n'okpuru ụda egwu egwu.Mgbe ọtụtụ ndị nkwusa jụrụ ya, ọ chọpụtara na "onye ọ bụla nọ n'obodo ahụ chọrọ ime ihe m mere. N'ihi ya, m gwara onwe m na ọ dị mkpa ka m chọpụta otú m ga-esi dị iche. "Ọ malitere na-abụ abụ The Star Spangled Banner na dị iche iche Sporting ihe n'ihi na ọ bụ ohere na-esi n'ihu 20 000 na-ege ntị na-enweghị na-enwe a nkwekọrịta na ụlọ ọrụ.Ná mmalite nke egwuregwu bọl basketball na Philadelphia, Taylor dị afọ iri na otu mara ụda egwu Jay-Z mgbe ọ sụsịrị abụ.Na iri na abuo, onye nlekota komputa gosiputara akwukwo guitar ato ya ma mee ka o dee akwukwo mbu "Lucky You".Tupu mgbe ahụ, ọ meriri otu asọmpi egwuregwu mba a na-akpọ "Monster na My Closet," ma site na oge ahụ ọ lekwasịrị anya na-ede abụ.Na 2003 Taylor Swift malitere na ndị mụrụ ha na-arụ ọrụ na music manager Dan Dymtrowem si New York. Na enyemaka ya mere na mgbasa ozi ụdị n'ihi Abercrombie na Fitch dị ka akụkụ nke ha mkpọsa "ebili kpakpando", otu n'ime ya song e esịne ke mkpokọta album Maybelline Ntecha na zutere na isi music nkwusa.Mgbe ọ na-abụ abụ mbụ ya na ihe ngosi RCA Records, Taylor Swift nwetara ọrụ ịzụlite ọrụ ma malite ịkwọ ụgbọala na-agakarị na Nashville.
Mgbe Swift dị afọ iri na anọ, nna ya kwagara alaka ụlọ ọrụ na Merrill Lynch nke Nashville, ezinụlọ ahụ kwagara n'otu ọdọ mmiri dị na Hendersonville, Tennessee.Swift kọwara ya n'ikpeazụ dịka "àjà dị egwu" site na ezinụlọ ya.Ndi nne na nna ya choro igosiputa ya di ka ndi na-aga n'ebe ndi mmadu na-ahu n'anya karia ka ohere nke Taylor na-abia kpakpando.Mama ya kwuru, sị, "Anyị agwawo ya mgbe niile na anyị anaghị eme ya maka ego, ma ọ bụ na anyị nwere nrọ."Na Tennessee, Swift gara Ụlọ Akwụkwọ Gọọmenti Hendersonville, bụ ebe ọ mụrụ ya na nke mbụ na nke abụọ.Mgbe e mesịrị, iji jikwaa usoro egwu egwu ya, Swift gwara Aaron Academy, ụlọ akwụkwọ Ndị Kraịst nke onwe ya na-enye ihe ọmụmụ ụlọ. 2008 nwetara akara ugoji ụlọ akwụkwọ sekọndrị mgbe ọ gụsịrị afọ abụọ gara aga nke ọmụmụ ya na ọnwa iri na abụọ.
Mmalite nke Ọrụ naTaylor Swift(2004-2008)
Na iri na anọ, Swift kwagara Nashville. Dị ka akụkụ nke nkwekọrịta na RCA Records, ọ zutere ndị egwú nwere ahụmahụ dị ka Troy Verges, Brett Beavers, Brett James, Mac McAnally na The Warren Brothers.N'ikpeazụ, ya na Liz Rose malitere nkwado na-adịgide adịgide.Taylor Swift hụrụ Liz Rose na-ekere òkè n'ọrụ RCA ma kwado ya mmekọ.Ha malitere izukọta n'ehihie Tuesday ọ bụla mgbe ha gụsịrị akwụkwọ na nhazi nke ederede.Rose kwuru na nnọkọ ndị a bụ "ụfọdụ n'ime ihe kachasị mfe m mere. N'ụzọ bụ isi, naanị m bụ onye editọ ya. Ọ (Taylor) dere banyere ihe mere n'ụlọ akwụkwọ n'ụbọchị ahụ. O nwere echiche doro anya banyere ihe ọ na-agbalị ikwu. Ọ na-ejikwa echiche ndị kasị dị ịrịba ama abịa. "Swift malitekwara idepụta ngosi ya na onye na-emepụta ihe nkiri Nathan Chapman.Mgbe BMI Songwriter's Circle na-egosi na The Bitter End, New York,Taylor Swift ghọrọ onye na-ede egwú na nwata kachasị mma na Sony / ATV Music Publishing.Ọ hapụrụ RCA Records mgbe ọ dị afọ iri na ise, n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ idekọ abụ ndị ndị ọzọ na-ede ede dere, ma ọ dị njikere ịmalite ọrụ ya na ihe nke aka ya.Ọ kwụsịrị mmekọrịta ya na Dan Dymtrow, onye njikwa onye mesịrị kpebie Taylor Swift na ndị mụrụ ya."Enwere m mmetụta na m nọ n'ụgbọ okporo ígwè," ka Swift chetara mgbe e mesịrị. "Achọrọ m ijide akwụkwọ ndị a ruo ọtụtụ afọ mgbe m ka na-eche ihe m meworo."N'ihe ngosi ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Bluebird Cafe na Nashville, 2005, Taylor Swift dọtara uche gaa Dreamworks Records, Scott Borchett, bụ onye na-akwadebe ịmepụta edemede onwe ya, Big Machine Records. Taylor Swift ghọrọ otu n'ime ndị na-ese foto mbụ ịbanye na nkwekọrịta na ụlọ obibi akwụkwọ ahụ,na nna ya n'ulo ohuru ohuru ahutara uzo ato.Iji kpọbata ya n'ime obodo egwú, Borchetta Taylor Swift mere ndokwa maka ọdịdị ya na Ememe Music CMA, bụ ebe ọ rụrụ dị ka ihe egwuregwu.
Ngwa ngwa malitere ịrụ ọrụ na mpempe akwụkwọ mbụ ya n'oge na-adịghị anya mgbe e mechiri nkwekọrịta ahụ. Mgbe ha nwetasịrị ndị Nashville nwere ahụmahụ, ha goro Big Machine ka ha were onye na-emepụta ihe mbụ bụ Nathan Chapman ụgwọ. Ọ bụ oge mbụ ọ na-aga ịmere ya ihe nkiri studio, mana Swift kwenyere na mmekọrịta ha dị mma maka ha.N'ikpeazụ, Chapman mepụtara nọmba album ọ bụla maka otu egwuTaylor Swift. Ya n'onwe ya kọwara album dị ka akwụkwọ edetu nke mmalite nke oge uto ya.Edere ọtụtụ n'ime nọmba ahụ n'afọ mbụ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma kọwaa ahụmahụ ndụ ọhụrụ dịka ịhụnanya mbụ na nchekasị n'oge ntorobịa.Taylor Swift kwuru na ọ bụ ezie na ọ na-ada "dị ka m nwere ụmụ nwoke 500," o dere ọtụtụ akụkụ nke abụ dịka onye na-ekiri ihe.Ọ bụ nanị Swift ka ọ na-ede egwu atọ, gụnyere ụmụ nwoke abụọ, na ndị fọdụrụ n'ime asatọ na ndị na-agụ egwú dị ka Liz Rose, Robert Ellis Orrall na Angelo Petraglia.A na-akpọ egwú ahụ dịka "ngwakọta nke ngwá egwú mba na ọdịda dị egwu, oké ifufe na-egbuke egbuke."Taylor Swiftwepụtara na October nke 2006.The New York Timeskọwara album dị ka "obere mba-pop, ma ihe magburu onwe ya na nke na-atụgharị anya, nke ndị na-eto eto Swift na-eduzi."Roger Holland si na magazin aPopMattersọ tụrụ anya na Swift "ga-enwe ike ịchọta nguzozi n'etiti mba a ma ama na echiche doro anya ya maka albumTaylor Swiftegosi na o nwere otutu onyinye. "Sasha Frere-Jones nkeThe New Yorkerkọwaara ya dị ka nwa "ọrụ ebube" ma jiri ya kpọrọ ihe maka ụdị ahụ, ya mere, ebe egwu egwu Nashville dị iche iche, Swift anaghị egbu oge n'iji R & B, ihe mgbapụta ma ọ bụ ihe egwu. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị mmadụ na-ahụ ụzọ ya dị ka omenala obodo Nashville.Na saịtị ahụMba kwa izuburu amụma na "ihe ndị dị otú ahụ na-atụ aro nkà nke nọgidere na-aga n'ihu n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị." Rolling StoneTaylor Swift dere, sị: "Mgbe 2006 dị naanị afọ iri na isii mgbe ọ bịara n'egwú ahụ site na mpịakọta mbụ ya, ọ bụ nwata ma bụrụ onye tozuru okè. (...) "Egwú anyị" gbajiri elu site na otu abụ ọchị dịka Britney ma ọ bụ Patsy. "
Big Machine Records ka dị n'oge ọ bụ mgbe 2006 tọhapụrụ ya mbụ, "Tim McGraw" na June, ya mere Taylor na nne ya nyere aka tinye CD n'ime envelopị ma zipụ ha na redio.2006 jiri ọtụtụ n'ime afọ akwalite album ahụTaylor Swiftna njem redio, bụ nke mesịrị kwuo, sị: "Mkpanaka redio nke ọtụtụ ndị na-ese ihe na-adịru izu isii. O were m ọnwa isii "Ndị na-ese ngwa ngwa na-ese eserese (sitere n'aka Jackson Pollock) iji nye ha ndị na-egwu egwu egwu bụ ndị gụnyere abụ ya na mgbasa ozi.O meela ọtụtụ ugboro na ihe ngosi TV, dị ka ngosi Grand Ole Opry,Good Morning America,kaTRL.Ọ pụtara n'ọtụtụ azụmahịa, na-akwado ọdụm jeans ma ghọọ ihu nke mkpọsa Verizon Wireless Mobile Music.Taylor Swift kọwara onwe ya dịka "nwa-ịntanetị" n'ihi na ọ na-eji mmekọrịta netwọk Myspace nweta ndị agbụrụ.O dere akwụkwọ nke onwe ya, kwuru banyere ọkwa nke ndị na-agbapụ ya, ma jiri aka ya zaghachi ozi nile ndị frans ya zigaara ya.N'oge ahụ ọ bụ ụda na egwu mba.Borchetta kwuru na ndị ọrụ ibe ya weliri nku anya ha mgbe ha kpebiri ịbịanye aka na nwa nwoke dị afọ iri na isii, mana Taylor Swift nọ na ohere nke ahịa: ụmụ agbọghọ nọ na-ege ntị na mba ahụ.Mgbe otu a, "Tim McGraw," e nwere ihe anọ ọzọ a tọhapụrụ n'etiti 2007 na 2008: "Teardrops on My Guitar", "Our Song", "Foto dị na Burn" na "Kwesịrị Ị sị Mba". Ndị niile nwere ihe ịga nke ọma na Billboard Hot Country Songs, "Abụ anyị" na "Kwesịrị Ekweta Mba" wee dakwasị n'egedege ihu ya. Ekelere onye na-abụ abụ "Song anyị," Taylor Swift ghọrọ onye ọbụ abụ nke kachasị nta, onye na-alụbeghị di na nwunye na-aga n'ugwu na-enweghị onye na-enyere ya aka."Teardrops on My Guitar" ghọrọ obere pop hit ma ruru ebe iri na atọ na ladderGerman100 na-ekpo ọkụ.A na-erere albums ahụ maka 39 000 n'izu mbụna March nke afọ 2011 rere ya na nde 5.5 ọtụtụ ụwa nile.Swift na-ewepụkwa album nke Christmas,Ụda nke Oge: The Taylor Swift Holiday Collectionna October nke 2007 na EPAnya omana July 2008.
N'ịkwado akwụkwọ mbụ ya, Taylor Swift rụrụ ọtụtụ; tinyere ememme na ihe ngosi ihe nkiri, o na-eme njem nlegharị anya ọtụtụ mba na-ese ihe. Ná ngwụsị nke afọ, 2006 mepere mkpọsa ọchị maka Rascal Flatts na njedebe itoolu nke Me & My Gang Tour, na-anọchi onye mbụ bụ Eric Churche, bụ onye a chụpụrụ.Swift mesịrị ziga Chọọchị mbụ ya na ihe edeturu: "Ana m ekele gị maka igwu egwu ogologo ma na-ada ụda na njem Flatts. Ana m ekele ya, Taylor. "2007 nwere ihe ngosi iri abụọ na njem nleta George Strait,ọtụtụ ihe ngosi na njem nke Summer Summer na Kenny Chesney,ahọrọ ụdị anya maka Brad Paisley na Bonfires & Amplifiers Tourna ọtụtụ egwuregwu na Soul2Soul II Na-agagharị na Tim McGraw na Faith Hill.Na 2008 Swift ọ na-egwuri egwu na njem Rascal Flatts.Na mgbakwunye na ihe onwunwe ya, Taylor Swift jikwa egwu Beyonce, Rihanna, John Wait, Lynyrd Skynyrd na Eminem.Tupu na mgbe ọ bụla egwu egwu, ọ na-anọ ruo awa anọ na-anọdụ ala na Fans.
2007 Swift meriri ya na Alan Jackson Onye Nwunye nke Year Nashville Songwriters Association. Taylor Swift ghọrọ onye ọbụ abụ kachasị nta ọ natara.O meriekwa akara ngosi Horizon maka Ọhụụ kachasị mma nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Egwuregwu Mba na egwu egwu.Na 2008, agụmakwụkwọ egwu obodo na-akpọ ya onye na-eto eto kachasị mmama merie mmeri nke onye na-abụ abụ na-ewu ewu na mba American Music Awards.Maka abụ ndị dị na album ahụTaylor Swiftenweela akara BMI asaa.Na 2008, a na-ahọrọ Taylor Swift maka Onyinye Grammy Ahịa kachasị ọhụrụ, ma emesị hapụ Amy Winehouse.
2008 - 2010:Egwu,Esemokwu VMA, Grammy fiasco
Na November 2008 wepụtara ya album nke abụọ a na-akpọ Fearless. O dere abụ asaa na ya n'onwe ya, gụnyere ụmụ nwoke abụọ, na ndị dere aha Liz Ros, John Rich, Collbie Caillat na Hillary Lindsey. Ya na onye na-emeputa ihe bụ Nathan Chapman na-emekọ ihe. Musical E na-ji dị ka "oké guitar na-adọrọ adọrọ, akpali akpali choruses, mgbe ụfọdụ violin na banjo tucked na mix." The New York Times, sị: "Swift bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu-arọ na-eduga na-anọchite anya nke mba. Ọ nwere ihe ndị ọzọ na kọntaktị na ya n'ime ndụ karịa ọtụtụ ndị toro eto. "Rolling Stone kọwara ya dị ka" ya mejupụtara ọkà mmụta na-amasị onyinye maka ewu amaokwu, okwukwe na akwa. Egwú ndị ọ na-abụ na nke mmụọ ya yie ka ọ ga-adị ka ụdọ nke nwa agbọghọ agbụrụ. "
Ya na Robert Allem, ọ na-akwado egwu egwu egwu nke ukwuu mgbe a tọhapụrụ ya. Otu ihe gbasara Ellen DeGeneres gosiri na ngosi. Ọ pụtakwara n'ọtụtụ okwu ndị ọzọ. Ọ na - akpọrọ ndị fanyere videoblogs na Twitter. A tọhapụrụ onye mbụ si na album "Love Stores" na September 2008 na na sekọnd ọ ghọrọ onye ọbụ abụ nke kachasị ire ahịa n'oge niile. Ọnụ ọgụgụ ya dị na 4 na Billboard Hot 100. N'ime afọ 2008 na 2009 hapụrụ mmadụ anọ ọzọ: "White Horse", "Ị Nọnyeere M", "Iri na Ise" na "Egwu". "Ị Nọnyeere M" bụ ụmụ nwoke kachasị ederede nke kachasị elu na 2 na Billboard Hot 100. Akwukwo a bu nke di na Billboard 200 Album Chart na mbipute 592 304 na izu mbu, site na mgbe ahu, uwa erela nde 8,6 nde. The album aghọwo ihe kacha mma ire ere nke afọ 2009 ma mee Swift a nnukwu mba ịga nke ọma.
Na nkwado nke album egwu egwu, Swift mere njem mbu ya. Njem Na-enweghị Atụ nwere ọrụ 105. 90 na-egosi na North America, 6 na Europe, 8 na Australia na otu na Asia. Maka ndị duet oge, John Mayer, Fait Hill ma ọ bụ Katty Perry. Ndị bu ya ụzọ bu: Justin Bieber, Kelli Pichler na Gloriana. Njem gara eleta nde mmadụ site na 1,1 wee nweta nde dollar site na 65. Ihe nkiri nkiri Taylor Swift: Njem na-atụghị egwu bụ televised na mgbe e mesịrị wepụtara na DVD na Blu-ray. Njem nlegharị anya nke Keith Urban dị ka onye na-aga n'ihu. Ọ rụrụ ọtụtụ onyinye, dịka ọmụmaatụ: CMT Giants rụrụ ya na mbipute nke "Drive" nke Alan Jackson, na 51. Grammy Awards bụ nke dị n'akụkụ Miley Cyrus na iri na ise, o dekwara otu parodo na T-Pain na CMT Awards. O dekwara ọtụtụ ọrụ ndị dị n'akụkụ. 2009 weputara onwe ya otu "American Girl" Tom Petty. Site n'enye aka na ya, ọ na-enwe otu "Half My Heart," nke John Mayer, bụ nke kachasị nke ọma na ọba anọ ya. Mụ na Martin Johnson na Robert Eliss Orrael, o jikọtara ya na abụ abụọ "Ị ga-achọta mgbe niile n'ụlọ gị" na "Crazier" maka Hannah Montana: The Movie Soundtrack. Na na na sv. Ụbọchị Valentine nyere aka na abụ: "Taa bụ Fairytale. Na album Hope for Haiti o dere abụ "Breathless" nke Better Than Ezra.
Ọ ghọrọ onye mbụ mba artist iji merie ihe MTV Music Awards, mgbe song "Ị bụ nke m" merie kacha mma nwanyi video nke afọ 2009. Ya nabata okwu ma ama etre site Kanye West, onye naara okwu n'aka-ya, si: "Beoyncé nwere mma video." Swift bụ a fan of West si music na gwara a ozi ọma ogbako na "ọ dịghị ihe ọjọọ mmetụta megide ya." Ihe ahụ merenụ natara ihe media anya ma jupụta ọtụtụ ọnụọgụ Ịntanetị. N'ụbọchị ole na ole, ọ kpọrọ ajụjụ ọnụ: "West nyere m mgbaghara m kwetara. Ọ bụ nnọọ ndị ji ezi obi. "Na ụdi ajụjụ ọnụ, jụrụ ikwu okwu banyere ihe ahụ merenụ, n'ihi na nke ọ na-achọghị ime" nnukwu ikpe ". "Ọ mere na TV ka onye ọ bụla wee hụ ihe merenụ. Enweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu banyere ya. "Ihe ahụ mere na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ emewo ka ọrụ ya dị egwu dị ukwuu.
2010 meriri ihe nrite 4 Grammy site na nchịkọta 8. The Album Na-atụghị egwu aghọwo Album nke Afọ na Best Album Mba. The song "White Horse" meriri egwu mba kacha mma na Best Women Singing Performance. Ọ ghọwo onye na-eto eto kachasị nta mgbe ọ ga - emeri Album nke Year award. N'oge ememe onyinye a, ọ bụrụ abụ "Rhiannon" na "Gị na Mụ" na Stevie Nicks. Egwuregwu ya na-eweta nyocha na-adịghị mma na nkwụsịtụ mgbasa ozi na-agbasaghị. A kọwawo abụ ya dịka "ihe ijuanya na ihe ọjọọ" na "ogbenye dara ogbenye". Ezie na New York Times dere, "ọ na-enye ume ọhụrụ ịhụ onye ka nkà flub ihe." Ma "ọ bụ ihe kacha mkpa ọhụrụ pop kpakpando na-adịbeghị anya." The music nyocha Bob Lefsetz buru amụma na ya ọrụ dị n'elu, "n'otu ntabi anya". Ọzọkwa n'ihu ọha kpọkuru ya na nna ya mere o goro "mgbasa ozi Crisis gị n'ụlọnga" jikwaa n'okwu a n'ihi na "Taylor bụ nnọọ nwata na nzuzu ịghọta ndudue i mere." The nta akụkọ Stevie Nick na-agụ egwú rịọrọ, sị: "Taylor na-echetara m nke m na mkpebi ya siri ike na àgwà nwata. Ọ bụ onye na-eme ka ọ ghara iju anya. Nwa agbọghọ a na-ede abụ dị ka Neil Diamond ma ọ bụ Elton John, bụ nke na-eme ka ụwa dum bụrụ abụ. Ụmụ nwanyị na - akwa nkume 'n' roll - country - pop songwriter bụ azụ na aha ya bụ Taylor Swift. E nwere ndị inyom dịka ya ndị na-aga ịzọpụta ụlọ ọrụ egwu. "
Ndị na-atụ egwu egwu emeriwo ọtụtụ nrite ndị ọzọ ma ghọọ akwụkwọ ndekọ kachasị ọnụ ahịa n'akụkọ ihe mere eme. Ọ bụ nwata nwanyị 6 na-eto eto na-emeri Winners nke Year site na Coutry Music Association. Ndị na-atụ egwu na-enwetakwa Best Album Award si Association. Swift ghọrọ onye na-eto eto nke kachasị nta iji merie Album nke Year na Ọmụmụ nke Ugwu Mba. The American Music Awards nyere ya Music Album kacha mma ma kpọọ ya Artist of the Year. A na-enye ya Hal david Starlight site Songwritter Hall of Flame, Nshville Songwritter Association kpọrọ ya Onye na-agụ egwú na Onye Ọhụụ nke Afọ. Billboard kwadoro ya site na onye na-ahụ 2009 ma tinye ya na ndepụta 100 kachasị mkpa 2010.
2010 - 2012:Kwuo Ugbu ana njem ụwa
Na October 2010 wepụtara ya atọ studio album Kwuo Ugbu a. Odeela abụ iri na anọ n'onwe ya, ya na onye na-arụ ọrụ ogologo oge Nathan Chapman na-edekọ ihe. Na egwu, album na-agbasa karịa mba-pop, na mgbe ụfọdụ ọ na-etinye na nkume na dirty pop. The New York Times kwuru na album dị ka a ọhịa, musically iche iche ma "ukwuu, ma eleghị anya ihe kasị mma." Magazine Rolling Stone kọwara Swift dị ka onye nke kasị mma songwriters na pop, nkume ma ọ bụ mba, "Swift nwere ike nkọ Nashville ọkachamara onye maara niile aghụghọ n'ihi na mmepụta nke hits, ma ọ bụkwa onye ezi uche nwa agbọghọ. "
Site n'ikwu okwu ugbu a, ọ na-agba ọsọ mgbasa ozi. Ọ pụtara na dị iche iche na ụtụtụ na-egosi na okwu na-egosi, nakwa dị ka free Obere-concerts na pụrụ iche ebe, dị ka. Na-emeghe abụọ-decker ụgbọ ala na Hollywood Boulevard ma ọ bụ na ọpụpụ ezumike na JFK. E wezụga Kris Kristofferson, Emmylou Harris, Vince Gill na Lionel Richie e abuana ke Los Angeles Club Nokia na "guitar esiri" - egwú keere òkè na ogbo na-egwuri now nsụgharị nke ha songs iji nweta ego maka Country Music Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha.
The mbụ otu si album "Mine" e wepụtara na August 2010 na ndị ọzọ na ndị ọzọ kpọrọ ihe karịrị afọ ise 2010 na 2011 bụ: "Back to December," "Pụtara," "The Story of Anyị", "Edemede ofufe" na "anyị". The album nwere nnukwu azụmahịa azụmahịa, debuting na elu nke US Billboard 200 chaatị. Ahịa mbụ ahụ bụ 1 047 000, na-eme ya ọbụbọ nke iri na isii na akụkọ ihe mere eme nke United States, rere otu nde otu n'izu. Na February 2012, a na-ere akwụkwọ na 5,7 maka otu nde nde.
2011 na mmalite nke afọ 2012 gara njem nleta. Otu ọnwa iri na atọ bụ: 111 na-ewebata njem nleta zuru ụwa ọnụ. 7 data na Asia, Europe 12, 80 ka 12 North America na Australia. Ọ ghọtara ọtụtụ ndị na-agụ egwú bụ ndị sonyeere otu oge Duo n'oge njem nke North America. Ọ rụrụ ọrụ na James Taylor, Jason Mraz, Shawn Colvin, Johnny Rzezniakem, Andy Grammez, Tal Bachman, Justin Biebrich, Selena Gomez, nicki minaj, Nelly, Bob, eweta, Flo Rida, NÃo, John onyeisi ọrụ, Jim Adkins kwuru, Hayley Williams, Hot Chilly Rae, Ronnie Dunn, Darris Rucker, T. McGraw na Kenny Chesney. N'oge North American tour dere maka onye ọ bụla arụmọrụ dị iche iche ihe odide nke ha songs na-ekpe-ya na ogwe aka, ederede ga-hụrụ dị a nocturnal ọnọdụ mgbanaka. N'oge tour, ọ na-egwuri ọtụtụ now nsụgharị nke ha songs na na obodo ọ bụla, na-akwụ ụgwọ ụtụ ya dị ka a anụ ụlọ nka. O kwadoro na nsụgharị nke abụ ndị ahụ mere ka ọ bụrụ onye a na-ahụghị anya na ọkachamara a zụrụ nke ọma. Ndị njem karịrị nde 1,6 na-aga njem ahụ ma mee ihe karịrị 123 nde dollar. Na November 2011 vadáno bụ nke mbụ ya na-ebi ndụ album, Gwa Ugbu a World Tour Live ebe 17 arụmọrụ site North America.
Na 54. Grammy Awards, song "Mean" meriri Best Country Song Award and Best Best Country Performance. N'oge ememe mmeri ahụ, abụ a na-egwuri egwu. A kpọrọ ya Entertainer of the Year site na Music Academy Country na 2011 na 2012, na site na Country Music Association na 2011. 2011 bụ Artist nke Year na American Music Awards na album a na-akpọ Best Country Album. Billboar kpọrọ ya 2011 nwanyị nke afọ.
Ka akwụkwọ ndekọ anọ ya na 2012 n'oge okpomọkụ, James Taylor gwara ya ka ọ bịa dị ka ọbịa pụrụ iche n'oge Tanglewood. Ha gwakwara ha "Fire and Rain" Love Story "na" Anyị ". James Taylor, bụ onye zutere ya maka oge mbụ mgbe ọ dị afọ iri na asatọ, kwuru, sị, "Anyị abanyela n'egwú ahụ. M hụrụ abụ ya n'anya na ọnụnọ ya na mbara igwe ahụ dị ukwuu. "
N'oge a, o nyere onyinye abụọ nke mbụ na ụda ụda egwu agụụ. "Nchekwa na ụda" dere ma dekọọ na Civel Wars na T-Bone Burnett. A tọhapụrụ onye ahụ na January 2013 ma nweela mgbe ọ rere ya na 1,4 nde otu nde na US. A na-enye abụ a onyinye kachasị mma maka ihe nkiri vidiyo maka Grammy Award na 2013 ma họrọ 70 maka Best Original Song. Golden Globes. Onyinye ya nke abụọ na "Open Eyes" bụ nke Swift dere na nke Nathan Chapman dere. O tinyekwara abụ n'abụ "Abụọ Anyị". onye na-emepụta egwú wepụtara abụ na BoB's second album, Strane Cllouds.
2012-2014Redna nsogbu site na boulevard
E wepụtara redio nke anọ nke Redio na October 2012. Ya n'onwe ya dere 9 site na 16 abụ na album. N'elu abụ asaa fọdụrụ, ya na Max Martin, Liz Rose, Dan Wilson, Ed Sheeran na Gary Lightbody jikọrọ aka. Nathan Chapman jere ozi dị ka onye na-emepụta ihe na album ahụ, ma Jeff Blasher, Butch Walker, Jacknife Lee, Dan Huff na Shellback nyekwara aka n'ịmepụta abụ ọ bụla. Chapman kwuru na ọ gbara ume ka Swift gbanwee ma gbalịa onwe ya n'ọnọdụ ndị ọzọ. N'ịdị egwu, mkpụrụ akwụkwọ nke ịnwale obi Rock, Dubstep na Dance Pop bụ ihe mgbagwoju anya n'agbata, ma ọ bụ ụdị nke Swift mara. John Caramica o Red dere, sị: "Na-erughị nkọwa zuru ezu na karịa ngwa ngwa. The album na-akwụsị igosipụta na ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa pop megastar na dị n'otu na egwu ndị okenye. Akwụkwọ akụkọ Rolling Stones kwuru, sị, "Ọ na-agakarị ọdịnala nke esemokwu mmetụta uche dịka Joni Mitchell ma ọ bụ Carol King ... ihe nchọpụta ya bụ otu n'ime akụkọ ndị kacha mma."
Dịka Mgbasa Mgbasa Red, ndị isi si na 72 redio n'ọdụ ụgbọ elu nile na ụwa gbagoro na Nashville, ebe ha mere mkparịta ụka n'otu n'otu na Swift n'oge izu mbụ nke ahịa ha. Ọ pụtara na ọtụtụ okwu okwu Tv ma rụrụ n'ememe egwu egwu na USA, Great Britain, Germany, France, Spain na Australia. Abụ abụ nke abụ bụ "Anyị Na-adịbeghị Mgbe Anyị Na-alaghachi" ghọrọ nọmba 1 mbụ ya na US Billboard Hot 100. A tọhapụrụ songs 6: "Malite ọzọ", "Amaara m na ị nwere nsogbu," "22" "Ihe niile agbanweela" "Oge Ikpeazụ" na "Red! (maka redio mba). Achịkọ ọbara ọbara a na-agba na mpịakọta Billboard 200, na nde nde 1,21 maka izu mmalite. Nke a pụtara ọmarịcha ahịa mbu maka afọ 10 na Swift ghọrọ nwanyị mbụ nwere akwụkwọ abụọ na izu izu nke mbụ maka mbipụta 1. Na May, 2013 rere nde nde zuru ụwa ọnụ site na 6. Na November, 2012 rere otu nde albums n'oge ọrụ 26 ya ma nwee 75 nde digitally ibudatara egwu.
Red tour na North America nwere 66 13 okwu gụnyere stadiums na show we site March 2013 - 2013-egbukepụ egbukepụ. Tour letara December 2013 stadiums gburugburu New Zealand na Australia na February 2014 England na Germany, na tour biri na isii ụbọchị na Asia. Ụfọdụ arụmọrụ òkù pụrụ iche ọbịa ndị dị otú ahụ dị ka Carly Simon, Tegan na Sara, Jennifa Lopez, Luke Bryan, Patrick n'ogwe osisi dapụ Boy, Ellie Goulding, Nelly, Lara Bareilly, Cher Lloyd, Bob, Gary Lightbody, Train, Neon Osisi, aghara Flatts na Hunter Hayes. Ya na ọtụtụ ndị na-ese ihe na-emekọ ihe n'oge ahụ. Ọnụ na Jack Antonoff dere song "dịkwa ụtọ karịa Ụgha" maka soundtrack na nkiri One Chance. Egwú ahụ nwetara mmeri maka Best Original Song na 71. Golden Globes. Mgbe CMA Awards 2013 rụrụ ihe now version nke song "Red" na Vince Gill na Alison Kraus. O mere na Rolling Stones na Chicago, mechara kwuo na ọ bụ otu n'ime oge kachasị mma na ọrụ egwu ya.
Egwuregwu Red enwetaghị Grammy ma a họpụtara ya na edemede anọ. The song "Anyị agaghị alaghachi azụ Ọnụ" e nominated na 2013 maka ndekọ nke afọ na album nke afọ 2014 maka Album nke Year. N'otu aka ahụ, ọ nataghị onyinye ọ bụla Mba Ndị Na-ahụ Maka Egwuregwu Mba. Otú ọ dị, Taylor Swift nọ 22 nnọọ e ọdịda a pụrụ iche n'ọtụtụ kasị elu Award maka "pụrụ iche" nweta na onyinye mba music n'ụwa nile. N'oge gara aga, naanị Grath Brook nwetara onyinye a. Ya award ọ ẹkenam Tim McGraw, Okwukwe Hill, Keith Urban, aghara Flatts, George Strait na Brad Paisley, Mick Jagger, Cary Simon, Julia Roberts, Reese Whitherspoon, Ethel Kennedy na Justin Timberlake. The New York Times na-ewere ndị na-agbata n'ọsọ nke na-edebe Taylor Swift na genre nke "àgwà nke mba music, ya kee ihe engine, ya nnochite anya na mbara ụwa." New Yorker kwuru, "a nwere ike ịbụ oge mgbe Swift nyere ijeoma na genre nke nyeere ya aka kpọmkwem ndị na-achị nke pop. "na 2012 merie atọ MTV Europe Music Awards, gụnyere award maka Best Nwaanyị na Best ndụ Act. Abụ "Amaara M Ị Na-akpata Nsogbu" meriri Best Best Video Video. Mgbe American Music Awards 2012 merie ndị award maka kasị mma obodo na-agụ egwú na na 2013 award maka artist nke afọ.
Na Red Red, ndụ ịhụnanya ya ghọrọ ihe dị egwu nke mgbasa ozi mgbasa ozi. The Village dere, sị: "Ọ bụ na-eto eto, nwere ike kontroverně ịrịba ama, na-enye onwe ya n'etiti ya akụkọ na, n'ezie, nke na-aga na a ọtụtụ ndị a ma ama na a dịtụ mkpirikpi oge, ma ọ dịghị nke a bụ nnọọ obere." Mgbe ememe Golden Globes, comedians Tina Fey na Amy Poehler ẹtọ na ya ịhụnanya ndụ na gwara ịnọ n'ebe na-eto eto na ndị na-ege ntị. Mgbe Efu Fair profaịlụ e mesịrị jụọ na-egosipụta nke a merenụ, sị: "M nnọọ mmasị na ya, ị maara na, dị ka m na-egwu egwu maka onwe ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ụfọdụ oké echiche, ebe ọ bụ na 2010 m wee na naanị mmadụ abụọ. "Mgbe na-ekwu banyere Swift mma hotara jaa Madeline Albright:" Na Hell bụ a pụrụ iche n'ebe ndị inyom ndị na-adịghị aka ndị inyom ndị ọzọ "
Esisịt ini ke enye ama okokụtde The Rolling Stones ke akpa June, 2013 ẹkesiode Taylor Swift nte enye ọkọtọn̄ọde utom ke ọyọhọ ọyọhọ ọfiọn̄ itiaita ita. "Ọ na-amaliteworị, mmetụta dị otú ahụ nke enweghị ike ọgwụgwụ, na mgbe ọ na-amalite, a na-esotekarị mpịakọta. Ọ ga-amasị m ide afọ abụọ tupu m gụchaa ọhụụ ọhụrụ, "CIA Music Fest na Nashville kpughere na nyochaa na azụ nke hiannon.Kemgbe ahụ, ọ na-edebe ihe nzuzo niile na nzuzo ruo mgbe o mesịrị kesaa ndị nduzi ole na ole na netwọk mmekọrịta na August, ma kwupụta ụbọchị na oge nke ọhụụ ndụ site na Yahoo - 18. August.
13. N'August, Swift na-egosi na TV Jimmy Fallon na-egwuri egwu yaEw!, ebe ọ na-egwuri egwu nke Natalie; na nyocha a na-egosi, Fallon gbalịrị ịgwa Taylor Swift ụfọdụ akụkọ ndụ site na Yahoo.Ụbọchị abụọ mgbe nke a gasịrị, ihe ngosi akụkọ sayensị nke ihe nkiri ahụ bịara na cinemasDonor(Onye Na-enye Gi) site na Phillip Noyce, ebe Swift na-eme Rosemary.16. August, tinyere Jaime King, sonyeere ihe a na-akpọ "Ice Bucket Challenge", ihe ịma aka Intanet nke na-eweta nchịkọta nnyocha n'ime ọgwụgwọ ALS. Gwa onye bụ maka na ikwafu a ịwụ nke ice mmiri, na-na ome na òkè video gafee n'Ịntanet, na mgbe isi ga-amasị Dare akwụ a narị dollar na-aga na akaụntụ nke American Association for agha megide ọrịa a. Ọtụtụ ndị ịma aka, gụnyere Taylor Swift na Jaime King, ga-eme ha abụọ, na-eme ọsọ ọsọ na inye onyinye.
Na 18. 2014 kwupụtara Taylor Swift site na Yahoo Live Stream, na-agbasa site na elu nke New York Empire State Building, nkọwa nke album na-abịa1989, nke na-apụta 27. October 2014. O weputara nke mbụ n'ime album a kpọrọ "Shake It Off". Dị ka okwu nke aka ya si kwuo, a na-eme ka 80 na-egwu egwu site n'ike nke album ahụ. afọ, n'otu oge ahụ ọ bụ album mbụ iji kwupụta pop.Na 24 na Sunday. Na August, onye ọbụ abụ bụrụ abụ maka oge mbụ na-ebi n'oge MTV Video Music Awards 2014 gala."Gbanyụọ Ya" bụ nke mbụ a kwụrụ na Billboard Hot 100 na 4. UK Singles Chart ọnọdụ.Kpọmkwem n'etiti abalị na 14. Octoberkpugheere otu n'ime abụ nke ọba ọhụụ a kpọrọ "N'ime Osisi".
Otu n'ime ncheta egwu kacha ochie nke Taylor Swift na-abụ abụ na chọọchị, nne nne ya si n'akụkụ nne ya, Marjorie Finlay (a mụrụ Moehlenkamp). Mgbe ọ bụ nwata, Finlay bụ onye na-egosi telivishọn na Puerto osikapa ma na-egwuri egwu na Thailand na Singapore. Dị ka a nnọọ obere nwa na Taylor mmasị soundtracks nke Disney fim: "Ndị mụrụ m chọpụtara na ozugbo okwu bịara, m chọrọ ka ike m." Potzději nne na nna ya ẹkenam nka dị ka James Taylor, Simon & Garfunkel na Deff Leppard. Obi dị ya ụtọ maka obi ike o nwere n'ebe nne ya nọ, bụ onye nyeere ya aka ka ọ na-akwadebe maka ngosi nke klas ya. Nne ya na-ekewet ya "mmasị nke ide na ịkọ akụkọ." Swift hụrụ n'anya na-agụ akwụkwọ uri, na karịsịa lara ọrụ Shel Silverstein na Dr. Seuss. Akwụkwọ ya kasị ewu ewu bụ igbu egbu na Mockinbird.
Ejiri ya "MusicNistX.let" dị egwu dị ka ndị inyom dị egwu dị ka Shania, Faith, The Dixie Chicks. Taylor na-eweta ụda na akuko nke egwu mba. Ọ bụ Shania Twain kọwara nsụgharị egwú kachasị mma na ọrụ ya. Ihe nlereanya nwata ya, bụ Fait Hill, na-anwa idepụta: "Ihe ọ bụla o mere ma ọ bụ ya onwe ya." Ọ masịrị Dixie Chicks nwere nkwanye ùgwù na ikike ha na-egwuri egwu. abụ ha bụ "Ebube na-eburu m ụzọ" buru ụzọ mụọ egwú.
Mgbe chọpụtara music začacla okenye obodo nka dị ka Patsy Cline, Loretta Lynn, Wynette na Dolly Fammy Parton.Věřila na Paron "ihe nlereanya magburu onwe inyom niile arọ." Ndị a mmadụ ndị ọzọ omenala obodo na-agụnye Miranda Lambert, Dwight Yoakam, George Strait, Garth Brooks, Kenny Chesney, Reba McEntire, Alan Jackson, Martina McBridge, LeAnn Rimes, Tim McGraw, Brad Paisley, Ryan Adams, Patty Griffin, Lori McKenna na Bon Iver.
Ndị ọzọ na-ese foto na-esite na mba ahụ na-emetụta ya. Mgbe ọ dị afọ iri na ụma ọ hụrụ Hanson na Britney Spears n'anya. Ọbụna n'oge a, o nwere "nkwụsi ike na-enweghị atụ" nye Spears. N'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọ nọ na-ege ntị n'ìgwè dịka Dashboard Confessional, Fall Boy, The American-Rejects and Jimmy Eat World. Ọ bụkwa onye na-agụ egwú ndị na-agụ egwú oge ochie dị ka Ingrid Clarkson, Michelle Branch, Pink, Alanis Morissette, Ashlee Simpson, Kelly Clarkson, Tefe Dolson na Avril Lavigne.
Taylor jikwa anya na-ele ihe egwu egwu na TV na OC na Chirurgové, na egwu ọ bụla ebudoro na n'ụlọ. Ọ bụ nnukwu agbụrụ hip hop: "Web bụ ihe mba na hip hop na-agwakọta." Ihe si n'ike mmụọ nsọ na-esite na ndepụta nke ndị na-ese ihe. Stevie Nicks na-akọwa ya dịka "dike nke kpaliri m n'ọtụtụ ụzọ." Ọ na-ahụ ndị na-ese ihe site n'aka 60. dịka ọmụmaatụ: Shirelless, Doris Troy na Beach Boy.
Paul McCartney, Bruce Springsteen, Emily Harris, Kris Kristonfferson, na Carly Simon bụ ihe atụ nke ọrụ ya. "Anyị na-jumped na ohere, ma ha ka na-ahụ na-ese ihe nile ha ọrụ." McCartney dị ka onye so beatles na solo artist eme na Swift echiche "dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-chebere n'obi na n'uche ... bụla musician nwere ike na nrọ nke akwụkwọ dị ka nke a. "ọ nwee mmasị Springsteen," ọ bụ ya mere musically otu ruo ogologo oge. "Mgbe Swift music na-etolite na-achọ nwere otu ohere dị ka Harris:" ọ bụghị ihe ama, ma banyere music. "banyere Krisoffersonovi kwuru," ọ bụ nanị otu onye nke ndị ahụ nọworo na ụlọ ọrụ a ruo ọtụtụ afọ, ma ị pụghị ikwu na ọ bụ na ha. "A maara Swift maka ọdịdị siri ike ma dị ike.
Egwuregwu na ịke
The Guardian n'oge mbụ na nke abụọ albums, kwuru, sị: "The isiokwu bụ nwee ezi na okwu nke na-eto eto ndụ na nostalgic melancholy ụda ma style." New York Magazine kwuru, sị: "Ole na ole na-abụ abụ, dere otú n'ụzọ doro anya na a ndekọ nke na-eto eto. Ọ bụ naanị ya ga-esi na 1960, Brian Wilson, bụ nanị ezigbo onye na-eto eto na-ede akwụkwọ tupu ya abịa. "E jiri ya tụnyere Janis Ian.
Na ya album abuo-adịghị atụ ụjọIhe oyiyi nke akụkọ ifo. Ọ mụtara njikọ dị n'etiti eziokwu (ịhụnanya) na akụkọ ifo (ịhụnanya). "Ngwakọta nke atọ, nke anọ na nke ise gbasara ndị okenye. Na mgbakwunye na romance na ịhụnanya, ụfọdụ n'ime abụ ya banyere nne na nna-nwa ("Best Day", "Never Grow Up", "Ronan"), ọbụbụenyi ("iri na ise", "Breathe", "22" N'èzí "," A Place In This World, "" Ejikọtara Ọnụ na ọchị "," Pụtara ") na ọrụ ambitions (" Change "," Long Live "" The Lucky One ").
New Yorker kwuru nke ya songs "bụ ejighị n'aka, nwere ihe ụfọdụ na sophistication ... sentimental songs na-gbakee ụdi mwute." Wepụrụ ebubo ahụ kwuru na ndị na-ewu Swift songs bụ "mgbalị supernaturally achịkwa pop Convention. Ole na ole na-arọ nwere ike iru mma àkwà mmiri karịa ọ bụ. "The Rolling nkume magazine kọwara ya" dị ka a na-agụ egwú-songwriter ọkà mmụta, nwere ebum pụta ụwa onyinye maka owuwu nke amaokwu-okwukwe-akwa. "The Guardian dere, sị:" na-eji oge dị ukwuu isusu ọnụ na na mmiri, ọ bụ ọrụ ebube ha nwere-echepụta nepomokavé akpụkpọ ụkwụ. "Journal of the American Songwritter Swift kọwara dị ka" a oké dere-ede na unmatched na fọrọ nke nta na-ekwekọghị n'okike ọhụụ ... ọbụna ya kasị okenye ihe onwunwe e ji na-echiche, nwere a kpọmkwem oke nke okwu na kpachaara anya melodic Ọdịdị. Ị gaghị achọta otu ọgba aghara ma ọ bụ ntụrụndụ na-enweghị isi. "
N'ọrụ ya ọ na-eji nkọwa nke ndụ ya. Mgbe na-ege ntị music ka a nwata, o nwere mmetụta na-mgbagwoju anya: "Apụghị m ghọta mgbe ihe na-eme na ndụ nke-abụ abụ na ha na-agwa ha music." New York Times na-ekwere "na raison d'être nke Miss Swift na-agbazi emehie ihe." Na ya songs mgbe doziri amaghị anwụrụ nke ya n'ụlọ akwụkwọ dị elu afọ na-adịbeghị anya ndị ọrụ ibe si ọgụgụ. John Mayer kwesiri ka ọ na-ekwu banyere abụ "Ezigbo John". Abụ a na-eweda ya ala. The Village Voice kọwara akụkụ a na-arụ ọrụ ya "na song na-agwa ihe o bu n'uche, ọ bụ dị ka onye nwere aspiring prọfesọ, na a egwu kwesịrị ekwesị ude nke ya talent, nke bụ confessional, ma ejije." Ọtụtụ media-ekwere na media na-achịkwa ya mkpebi iji autobiographical nkọwa bụ omume rụrụ arụ n'ihi na ọ na-ajụ ya mbụ mmekọ. Onye ọbụ abụ n'onwe ya kwuru na abụ nile ahụ adịghị adị ma na-adabere na nlebara anya. Ke adianade ya awụ ọsọ n'ugwu kpọmkwem na-agbalị na-ekwu banyere ihe ma ọ bụ mmadụ na songs, n'ihi na ha bụ ndị ezigbo mmadụ, "Ị na-agbalị ile anya na-enweghị na-emenye ihere ọ bụla."
Egwú na ụdị egwu
Egwú ya gụnyere ihe dị iche iche nke pop, mba, obodo pop-rock na pop-rock. N'ịbụ onye a kọwara dịka onye na-ese egwu obodo, ọ na-agbanwe site na 1989 dị ọcha ka ọ dị ọcha. Mana n'ọdịnihu, Swif na-ezube ịdere mba ọzọ mba.
Group The Rolling nkume na-ekwu "nwere ike na na na a mba ebe, ma ọ bụ otu n'ime ole na ole ezi nkume kpakpando anyị ụbọchị ndị a natara." The New York Times na ndetu, "si Miss Swift bụghị a otutu music na ike-atụle n'ihi na mba, mgbe ụfọdụ, na-arụ na banjo, na ogbo mgbe ụfọdụ wears ṅụrụtụ akpụkpọ ụkwụ nwere a dazzling guitar, ma e nwere ihe na ihe bụ na Nashville unikátní- amara na ukwu ngwangwa přednes.Swift a na-ewere a omenala pop-mba naanị n'ihi na o dere akụkọ abụ ndị dị egwu ma dị egwu, ya mere ọ bụ ihe dị mkpa na Nashville. "
Nkọwa nke onwe ya banyere egwu mba "bụ n'ezie nnọọ mfe. ọ bụ mgbe mmadụ na-abụ abụ banyere ndụ ha banyere otú ha si too n'ugbo, ọ hụrụ ya n'anya ma ụmụ ya tolitere n'ubi ahụ. Ụfọdụ ndị, mgbe ha na-enwe mwute, na-abụ abụ banyere otu ha si aṅụ mmanya na ntanetị. M na-ede abụ ndị m na-apụghị ịbịakwute ụkpụrụ nke mmekọrịta na otú ịhụnanya si masị ya. "
A kọwara olu ya dịka "ụtọ" ma dị nwayọọ. Ọ na-ezi na-emetụta nkpuchi ka overlord ghọrọ a na-agụ egwú, na-ebelata mbụ ụzọ na akara mgbe ihere girl agbalị ike ikwu okwu. Nwa nke olu-ya bụbu bland na mgbagwoju anya, ma nke ahụ na-agbanwe ugbu a bụ mkpa na imebi mgbe strays interface na-eme ka ndị crazy. Ọ mụtara ihe ọ na-ekwu.
Ndụ kacha mma ma ọ bụghị dị ka Christina Aguilera ma ọ bụ Carrie Underwood. A kọwara abụ ya dị ndụ dị ka ihere, dị ntakịrị ma mgbe ụfọdụ ihere. Na agbanyeghị, Swift natara otuto maka ịjụ ịgbanwe olu ya.
O yikarịrị ka Swift ọ ga-abụ onye na-ede egwú, "M na-ede abụ, olu m bụ nanị ụzọ isi gosipụta okwu ndị ahụ zuru ezu." Onye na-elekọta ya bụ Scott Borchetta kwetara na ọ bụghị onye ọbụ abụ kachasị mma. Egwú ọ na-abụ bụ ihe jikọrọ ya na ya, ọ na-arụkwa ọtụtụ ọrụ iji meziwanye. Na 2010 a mara ọkwa na ọ ga-anọgide na-abụ abụ ruo ọtụtụ awa nke ịbụ abụ.
Ngwa ngwa na ụjọ na-emetụ na arụmọrụ "ma ọ bụrụ na ọ maghị ihe ndị na-ege ntị na-eche banyere ya, dị ka inye onyinye."
Foto ndi mmadu
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-acha uhie uhie.
Onye na-achọ oké ọchịchọ nke ga-eme nke ọma n'agbanyeghị ọrụ ya. Ewu ewu Magazine na àgwà ya kọwara dị ka "smart na-akpa ọchị na mgbe ụfọdụ bara nnọọ omume rụrụ arụ." Grantland kọwara ya dị ka "ọkpọ" na "n'ihu ọha na ụjọ na a ụzọ ahụ ị ga-adịghị ahụ na mba ndị eze dị ka Faith Hill ma ọ bụ Carie Underwood. Ọ dị nnọọ ka Diane Keaton na ihe nkiri ịhụnanya Annie Hall: dị njikere iji ịnụ ọkụ n'obi, ịnụ ọkụ n'obi, ụjọ, nwee obiọma, na-agbasi ike n'oge ọ bụla.
N'ịkwado 1989, Swift malitere iji netwọk mmekọrịta mmadụ na ndị na-ege ntị, ma kpọọ ndị 100 Fans ka ha gosi vidiyo na vidiyo Shake It Off. Ngwa ngwa zigara onyinye ndị Krismas onyinye nye ndị agbapụ ma kpọọ ha ka ha bịa n'ụlọ, ebe ha na-anọkọ oge ọnụ. O kwuru na ya nwere "mmekọrịta kasị dị ogologo na nke kachasị mma" ya na ndị na-agbapụ ya, ọ na-agwakarị ha na ememme a. A maara na ya na-ahụkarị ndị na-akparịta ụka n'Ịntanet. Ya na ndị fans ya na-ejikọta na netwọk mmekọrịta nke Instagram na ọtụtụ nsogbu - ọbụna n'oge ememme a.
Ná mmalite afọ nke ya ọrụ na Swift bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado anya, nke gụnyere nke okpomọkụ Uwe na ṅụrụtụ akpụkpọ ụkwụ. Ndị na-eto eto bụ ndị na-eto eto na-emepụta ụdị ejiji a. Mgbe gala omume a mara maka "sparkly, beaded uwe." Ntutu isi ya bụ ndammana mgbakọ napodobovám Fans na Swift kwuru, sị: "M na-echeta otú m iji tụnyere ya ntutu isi n'ihi na m chọrọ ịdị ka onye ọ bụla ọzọ na ugbu a niile a edozi isi ejije. Ọ bụ fun. "Na 2011 magazine ewu ewu jụrụ bee m bangs na n'ihu na peeji nke nke magazine. Na 2014 ka ya ntutu mkpirikpi na ugbu a na-eyi ya ịgbatị ntutu. Na 2011, a na-akpọ Vogue American Style. A na - akpọ ya nwanyị kasị mma ejiji maka 2014.
Mmetụta na mmata
Ọrụ ya abụwo otuto site n'aka ndị na-ahụ ihe ngosi. Bill Withers na-ekwu, "Ọ maara ihe, dị ka onye na-ede egwú, enwere m ike ịghọta ya. O kwesịrị inweta ihe niile ọ rụzuru. "Neil Young na-akọwa ya dị ka" onye na-ede egwú ":" Enwere m mmasị Taylor Swift. Achọrọ m ige ya ntị. Ọ na-amasị m ilele otú o si emeghachi omume na mwakpo niile. Enwere m mmasị ịkọwa onwe m. "Stephen Skills na-akwado ụdị edemede ya:" Nke ahụ bụ ihe ị na-eme mgbe ị bụ onye na-ede egwú ... ị na-etinye obi gị na aka gị ma dee ya. "
James Taylor, onye na-akpọ Swift ugboro abụọ, kwuru, sị, "Anyị nwere ịhụnanya, ọnụnọ ya na mbara igwe dị ukwuu." Elvis Costello kwuru, sị, "Echere m na ọ bụ ihe na-akpali mmasị. Ị nwere ike ịhụ ogo nke njide onwe onye, ​​ọ masịkwara m. "Judy Collins na-ekwu na Swift dị ka ihe atụ nke kpakpando nke oge a nke na-aga n'ihu n'ahịrị nke onye na-esere onwe ya.
Banyere Swift Kristoffenon, ọ na-ekwu, sị: "O juru m nnọọ anya. Maka m, ọ dị ịtụnanya ka otu onye na-eto eto si ede abụ dị oke egwu. N'agbanyeghị n'usoro nwere ihe dị ịtụnanya ọrụ. "Janis Ian kwuru na" Swift gbanwere n'ihi na ụmụ agbọghọ na ihu na-music skládánáním songs ma na-akpọ guitar ... e nwere nke a bụ ezigbo ya. "Nicks kwere Swift," ọ na-ede songs dị ka Neil Diamon na Elton John, nke na-eme ka dum ụwa ga-abụ abụ. "
John Bon Jovi na-akọwa ya dị ka "ezigbo ngwọta na ntụle ọ bụla, ọdịdị na ọdịdị. Ọ bụ a songwriter, na-agụ egwú na ndị mara mma girl. "Parton si" nnọọ masịrị Swift, akpan akpan ya songwriting ... m na n'ezie masịrị hlobkom ha songs, nwere Njirimara ga-a ogologo oge. "Etheridge ekwu, sị:" M na-ahụ ya n'anya spirit, ya obi ike. Echere m na ọ ga-iju ndị mmadụ na a ga-enwe a nnọọ ogologo oge. "
Swift enwetawokwa otuto sitere n'aka ndị na-agụ egwú n'oge a. Supporter nke ya n'oge ọrụ bụ John Mayer: "Ị nwere ike ịga na ọ na oge ọ bụla music oge na ọ ka ga na-kụrụ." Toonụ nwekwara merie otuto si Drake, Tegan na Sara, Grimes, Kesha, Katy Perry, Kelly Clarkson na lady gaga.
Ryan Adams kọwara ya dịka otu n'ime "ndị na-agụ egwú kachasị egwu m hụtụrụla. Anọ m na ya nọrọ n'ime ụlọ ahụ wee nụ abụ ọ dere na ebe ahụ ma ọ dị ịtụnanya. Ọ bụ ihe ọjọọ dị mma. "Kathleen Hanna" kpam kpam na Taylor Swift. Echere m na o nwere nnukwu okwu egwu na enwere m obi ụtọ ịde egwú nke m. "Shirley Manson kwuru, sị," O nwere nkà dị ukwuu maka ide abụ ... ọ nabatara ọnụ ụzọ ya wee gaa kpọmkwem na ha. Anyi kwesiri igosi ya maka idi elu ya. Nke ahụ bụ ihe ndị na-ese ihe kwesiri ime. "Lena Duhman, kpakpando nke HBO TV series Girls, kọwara ngwa ngwa dị ka" mkpụrụ obi metụtara mkpụrụ obi. "
N'ịkwado album mbụ ya, ọ pụtara dị ka ihe nlereanya maka jeans na ihu nke mkpọsa Verizon Wireless 'Mobile Music. N'oge a na - atụghị egwu, ọ na - agbakọta ọtụtụ uwe mgbokwasị na Wal - Mart ma mee ka ụmụ bebi Jakks Pacific na ụmụ bebi. Ọ ghọrọ onye nkwado nke ìgwè Nashville Predators na ihu Sony Cyber ​​- igwefoto dijitalụ. Ọ na-egwu egwuregwu vidiyo na Band Hero. Na oge nke okwu Ugbu a ọ wepụtara mbipụta pụrụ iche nke ọba ya site na Target. Ọ ghọrọ ihu CoverGirl wee wepụ mmanụ ala Elizabeth Arden, Wonderstruck na Wonderstruck Enchanted.
N'ịkwado redio nke anọ Red, Swift nyere otu album na Target, Papa John's Pizza na Walgreens. Ọ ghọrọ Face Coke Diet na Keds Sneakers. O weputara ya ísì nke atọ, Elizabeth Arden, nke Taylor Taylor na-akpọ Taylor. Ọ nọgidere na-arụ ọrụ na Sony Electroncs na American Greeting. N'oge njem Red, ọ na-akwado ụlọ ọrụ dị iche iche, dị ka Air Asia na Qantas, bụ ndị jere ozi dịka ụgbọelu ụgbọelu na njem nlegharị anya Australia na Asia, ebe Cornetto kwadoro akụkụ Asia nke njem ahụ. A kwadoro album 1989 na ụzọ ụgbọ ala, Keds. Echiche nke Coke. 2014 wepụtara ya ihe nsure ọkụ nke anọ.
Onye na-eme egwuregwu
Swift nwere mmalite nke mbụ ya na 2009 na akụkọ ihe mere eme nke Crime nke Las Vegas, na-eto nwa agbọghọ na-enupụ isi. Akwụkwọ akụkọ bụ The New York Times kwuru na àgwà ahụ nwere ngwa ngwa ka ọ bụrụ "ihe na-adịghị mma na ikwenye ekwenye." Mgbe afọ ahụ gasịrị, Swift kwadoro ma rụọ ọrụ dịka onye na-egwu egwu na Saturday Night Live. Akwụkwọ ọnụ ahịa Weekly kọwara na "SNL bụ oge a kachasị mma" gosipụtara na ọ "nwere ike ịkwado ọrụ dị iche iche."
Mbido mbụ nke Swift na fim ahụ bụ ihe nkiri nkiri "On St. Ụbọchị Valentine. Ngwá egwu, ebe ọ na-egwuri egwu nwa agbọghọ na-amaghị ihe na-eme egwuregwu nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ ahụ gosiri na ọ na-arụ ọrụ kasị mma, The Los Angeles Times: "The Real Real Comic Potential", San Francisco Chronicle: "Very Funny", Time: "More Cute," News Daily: "Mgbu na-enweghị ihe mgbu". Na 2012, Swift mere Aundrey na fim nkiri ahụ bụ Lorax. Na 2013 o mere obere oge na New Girl ọchị. 2014 na-akwado òkè na fim Doncer.
A na-asọpụrụ mgbalị dị iche iche na-enye obi ụtọ site na nzukọ Otu Ihe, The Giving Back na Tennessee Disaster Services. 2012 mere ka Michelle Obama Swift na Onyinye Enyemaka Ukwu ahụ maka "ịkwado ndị ọzọ" na "site na mmụọ nsọ maka ndị ọzọ". N'otu afọ, Kerry Kennedy, ndị Robert F. Kennedy Center maka ikpe ziri ezi na Human Rights, ọkọnọ Swift na Ripple nke Hope Award maka ya "nkwa aka ndị dị otú ahụ a-eto eto afọ ... Taylor bụ ụdị nwaanyị ahụ ga na-achọ ka ụmụ nwaanyị."
Swift bụ onye kwadoro akwụkwọ agụmakwụkwọ. 2010 nyere 75 000 $ ụlọ akwụkwọ nashville na Hendersonville iji nyere aka rụzie ihe ọkụ na egwu nke ụlọ mgbakọ ụlọ akwụkwọ. Na 2012, 4 kwere nkwa na ọtụtụ nde dollar iji kwụọ ụgwọ ụlọ nke ụlọ akwụkwọ mmuta ọhụrụ n'Ụlọ Nzukọ Ezumezu Mba na ụlọ ngosi ihe nka na Nashville. Iwuru 7 500 m2meghere na 2014 ma ga-akwado mmemme ọhụrụ na nzụlite maka ndị na-eto eto na ndị agadi. Mpaghara ahụ nwere mpaghara atọ na oghere ngosi na ụlọ ndị nwere mmemme dịka ụlọ ezumike ụmụaka na ụlọ klas ebe a na-enwe ike ịmepụta ihe nkiri ọkpọ egwu na ihe ndị ọzọ. Ndị isi ihe nkiri na-ahụ maka ụlọ ọrụ dị na Taylor Swift Training Center na onye na-agụ egwú so na ndị otu. Na 2012 Swift, ọ na-arụ ọrụ na Chegg School of Books wee nye 60 000 $ maka ihe egwu 6 gaa kọleji ndị America. 2013 Swift na-enye 100 000 $ nashville symphony.
Swift akwalite ụmụ mmuta. Na 2009 250 000 o nyere $ dị iche iche na ụlọ akwụkwọ gafee mba na-ma gara ma ọ bụ nimy nwere ndị ọzọ mmekọrịta. The-eji ego ahụ azụta akwụkwọ, nkuzi ihe ego na nyeere ndị nkụzi 'ụgwọ ọnwa. Na 2010 rụrụ na a ndụ na agbasa ozi n'ikuku, nke e ekpuchi naanị maka ụlọ akwụkwọ na US mkpọsa usọrọ akwụkwọ Gụọ Kwa Day. Na 2011 6 000 Swift nyere Akwụkwọ Library Reading Public Library na Pennsylvania. Na 2012 14 000 akwụkwọ inye n'ọbá akwụkwọ Nashville Public Library na Tennessee. Ọtụtụ akwụkwọ na-nkewa n'ime mgbasa, ndị fọdụrụ e zubere maka ụmụ ala-ego ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara na kindergartens. Na 2012 co-onyeisi oche mkpọsa Across America na-agba ume ka ụmụaka na-agụ. Na 2012 Swift kwalite agụ nke abụọ ndụ webcast "ike ịgụ" ohuru ozugbo na klas na US. Na 2013 2 000 akwụkwọ nyere site na ụzọ nke The Ruo Eru omume na n'oge mmuta nkà Reading Hospital Child Health Center.V afọ 2014 pụtara na-acha uhie uhie na mkpọsa na abuana ke ọzọ akwụkwọ webcast, akwabawo ọmụmụ ke United States. Na 2014 o nyere dum wee si na song "Welcome ka New York" New York City n'ụlọ akwụkwọ ọha.
N'oge ọrụ ya, Swift nyere ego iji nyere ndị ọdachi dakwasịrị aka. Na 2008, o nyere onyinye maka ire ere ya na Ngalaba Egwuregwu Mba na Red Cross ọdachi. Mgbe afọ ahụ gasịrị, 100 000 nyere Red Cross aka nyere ndị gburu 2008 mmiri mmiri na Iowa aka. 2009 kwadoro na Victorian Appeal mgbe ọ sonyere egwu na Sydney Relief Concert. Onu ego a kwesiri ka odi elu karia onye ozo nyere ndi Australia Red Cross. 2012 tinyere Olileanya maka Haiti Telethon, ebe ọ na-ekwu banyere ịza oku ekwentị site na ndị nlele chọrọ inye ego. Swift na-edekwa abụ na album Hope maka Haiti. Na nzaghachi na 2010 May na Tennessee, e nyere 500 000 $ n'oge mkparịta ụka ekwentị WSMV. Mgbe e mesịrị na 2010, e nyere 100 000 na Hendersonville, nke mmiri mmiri mebiri. 2011 nyere 750 000 $ nrite site na nkwuputa okwu ikpeazụ. O nyere 250000 $ maka onye ọrụ ebere, onye nchịkwa football Alabama, Nicks Ụmụaka iji nyere aka mezi emebi nke oké ifufe ahụ.
Swift emegide ịkpa ókè megide LGBT. Mgbe igbu ọchụ nke Larry King na 2008 dere izi network PSA na-alụso-akpọ asị mpụ. Ke akpa ncheta nke ọnwụ nke Larry Kig Swift ọ gwara magazine Seventeen, mụrụ ya kụziiri ya "mgbe ndị ọzọ ikpe ihe ha hụrụ n'anya, agbụrụ ma ọ bụ ihe okpukpe ha." Na 2011 ndị music video maka song "Pụtara" mesoo iji ike emegbu mmadụ na abụọ ụlọ akwụkwọ. The video e mesịrị nominated maka MTV VMA award na-elekọta mmadụ na-eme. The New York Times kwuru na o kweere Swift, nke bụ akụkụ nke "a ọhụrụ ife nke ụmụ agbọghọ, na-enye a ọhụrụ ụda maka a ọgbọ nke nwoke nwere mmasị nwoke Fans dozie ha bụ n'oge nke mgbagwoju anya ozi nke taa omenala."
Onye ọbụ abụ na-arụ ọrụ dị iche iche nke ọrụ ebere na-enye ọrụ maka ụmụaka nwere ọrịa. 2008 nyeere Chevy pink pick up for Victory Junction Gang Camp, a na-eji ụgbọala ebu ụmụ si ọdụ ụgbọ elu gaa n'ogige ahụ. Na 2011 Swift nyere, dị ka-eto eto nke na-eme egwuregwu nke Year si Academy of Country Music, 25 000 Dollar Hospital St. Research Jude na Tennessee. A nabatara ego a na Ụlọ akwụkwọ Academy. 2012 tinyere aka n'igbochi ọrịa cancer, ebe o jiri abụ bụ "Ronan" na-echeta otu nwatakịrị nwoke dị afọ anọ nwụrụ nke cancer. A na-ebudata egwu ahụ ma nweta ihe niile e nwetara na òtù ebere na-arịa cancer. Na 2014 100 000 o nyere dollars Foundation maka Cancer Research na 50 000 dollars Ụmụaka Hospital na Philadelphia. Swift na-ezute ọtụtụ ndị ọrịa na Foundation Make-A-Wish. Ọ na-eme nleta nzuzo, dịka ọmụmaatụ, na Ụlọ Ọgwụ St. Petersburg. Jude Childrens Research, Medical Center Reed Army, Ronald McDonald House, a ọgwụ center osisi cedar - Sinai na Ụmụaka Hospital - Medical Center na Ụmụaka Hospital Vanderbitt.
Swift na-agba ndị na-eto eto ume ka ha wepụta onwe ha n'obodo ha dịka akụkụ nke Ụbọchị Ndị Ntorobịa Ụwa. 2007 malitere oru iji chebe umuaka site na ihe ize ndụ ntaneti n'iso ndi otu ndi uweojii na ndi uweojii na Tennessee. 2007 na-akwado mgbasa ozi Allstate na-akwalite ụgbọ ala dị mma maka ndị na-eto eto. Na 2010 ọ rụrụ na Mgbasa Ozi Mmiri. Enyere ọtụtụ ndị ọrụ ebere, dịka Elton John AIDS Foundation, Habitat for Humanity, MusiCares, na Feeding America. Ọ na-arụkwa n'ọtụtụ mmemme bara uru.
Nye ndị mụrụ ya, Swift zụtara otu ụlọ ala na Belle Meade, Tennessee. Nwa nwanne ya nwoke, Austin, bụ nwa akwụkwọ nke Mahadum Notre Dame ma na-eme ihe nkiri ụlọ akwụkwọ. N'ọnwa Disemba, nne mama ya chọpụtara ọrịa cancer 2014.
Ebe obibi nke Swift bụ ụlọ elu dị na Tribeca, New York. Ọ na-etinye oge ya n'ime ụlọ atọ dị na Beverly Hills, California, na n'ụlọ elu dị na Nashville. Enwekwara ụlọ nke dị n'ụsọ oké osimiri asatọ na Rhode Island.
Dị ka ndepụta Celebrity 100 agbala kwa afo May site Forbes magazine ka Swift na 2009 ọ akwụ $ 18 nde ke 2010 $ 45 nde ke 2011 $ 45 nde ke 2012 $ 57 nde ke 2013 $ 55 nde na na afọ $ 2014 64 nde.
Swift na Joe Joeas na-egwu egwu site na July ruo October 2008, omee Taylor Lautner site na October ruo December 2009. Dika onye na-egwu egwu John Mayer sitere na njedebe nke 2009 ruo mmalite nke 2010. Ya na omee Jak Gyllenhall si na October ruo December 2010, mgbe e kewara nkewa na January na February 2011. Site na July ruo September 2012 gara onye ọchịchị na Connor Kennedy, site na October ruo January 2013 gara onye ọbụ abụ Harry Styles.
Na 2013 na 2014 Swift mere na-aga na onye ọ bụla, na-ezo ekweghiekwe obibi ọzọ media anya. "Enwere m mmetụta na ọ bụrụ na m na-emeghe uche m ịhụnanya, ọ ga-adị mma ka m egwú." Ọ na-ebe-kọrọ na Swift malitere ịlụ a dere na music na-emeputa Calvin Harris si 6. March 2015.
N'oge president mgbasa 2008, Swift akwado ọ bụla Woman mkpa mkpọsa iji na ụmụ nwanyị na-ekere òkè na ndọrọ ndọrọ ọchịchị usoro na bụ otu n'ime ọtụtụ kpakpando ndị e dere a ọha ozi maka mgbasa ozi N'ihi na gị Country. O kwuru, sị, "Echeghị m na ọrụ m bụ ịnwa ịmanye ndị mmadụ otú ha kwesịrị isi na-eme ntuli aka." Mgbe ememe ahụ gasịrị[isi iyi?]President Obama gwara Rolling Stone na ọ kwadoro onyeisi oche ahụ: "Ahụtụbeghị m mba a obi ụtọ maka mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Enwere m obi uto na nke a bụ nke mbụ m họọrọ. "
Na 2010 mbụ US President George HW Bush gara a telivishọn pụrụ iche na Kennebunkport, Maine, ebe ọ rụrụ na Swift. Swift mesịrị kọwara dị ka "emetọghị emetọ" na nnọọ mma. Na 2012 bụ Swift ọdịda nke Kids Choice na ude nke ya ọrụ ebere na-arụ ọrụ site n'aka Michelle Obama, onye kọwara ya dị ka onye "bilie n'elu nke music ụlọ ọrụ, ma ka ala n'ụwa, onye karịa niile na-atụ anya, nke 22letý nwere ike imeta. "akpa nwaanyị a mechara kwuo Swift dị ka" ụkpụrụ ". Na 2012 Swift na N'ajụjụ ọnụ kwuru na ọ bụ ezie na ya onwe m na-agbalị ịnọgide "gụrụ akwụkwọ na asian dị ka omume," na-ekwu otú "banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'ihi na ọ nwere ike na-emetụta ndị mmadụ." Ọ na-ekwu banyere ya mmasị na American akụkọ ihe mere eme na-agụ akwụkwọ banyere Abraham Lincoln, John Adams, tọrọ ntọala Nna na Ellis Island. Swift nọrọ oge ụfọdụ ndị ezinụlọ na Kennedy na-ekwu banyere ya mmasi maka Ethel Kennedy.
Nrite na nsọpuru
Swift natara ọtụtụ enọ na ukpono, nke na-agụnye 10 Grammys, American Music Awards 16, 11 ahịa Country Music Association, 8 ahịa Academy of Country Music, German Music Awards 34 na 1 Brit Award. Dị ka onye na-ede egwú, òtù Nashville Songwriters na Songwriters Hall of Fame na-asọpụrụ ya.
Ná mmalite nke afọ 2015 40 Swift akanyam karịrị otu nde albums 130 nde ebudatara ma 5 bụ otu n'ime ndị na-ese ihe ndị kasị elu digital sales n'ụwa nile. Onye obula nke 5 studio albums nke Swift weputara n'aha 4 nde US:Taylor Swift(5,5 mil),-adịghị atụ ụjọ(6,9 mil),Kwuo Ugbu a(4,5 mil),Red(4,1 mil) na1989(4 mil)
Maka ama ndi ọzọ, lee Discography Taylor Swift.
-adịghị atụ ụjọ(2008)
Kwuo Ugbu a(2010)
Ụda nke Oge: The Taylor Swift Holiday Collection(2007)
iTunes Live si SoHo
Kwuo Ugbu a: Njem Ụwa Na-aga
CMT okporo ụzọ: Taylor Swift & Def Leppard(2008)
Soundtracks na fim[
Egwuregwu Ọkụ: Taylor Swift & Civil Civil - Nchekwa na ụda(2011)
Agụụ Agụụ: Taylor Swift - Anya Open(2011)
Ebube Ozo: Taylor Swift - Enchanted
Na na - na na na na na na na na na na na na na na - na na na na na -
2009 Jonas Brothers: The 3D Concert Sam onwe ya Ọrụ dị obere
The Las Vegas Crime Haley Jones Egwuregwu "Gbanwuo, Tụgharịa, Tụgharịa"
Hannah Montana: The Movie Sam onwe ya Ọrụ dị obere
Saturday Night Live Sam onwe ya Mkpọchi / Music Ndị ọbịa
2010 N'ụbọchị Ɛpo Felicia Onye na-eme ihe nkiri na fim
2012 Dr. Seuss 'The Lorax Audrey Onye a bụ Taylor kwuru
2014 Onye nyere ya Rosemary Ụdị akụkụ
1: Discography site na Taylor Swift
2: Egwu (album, Taylor Swift)
7: ọsọ ọsọ
9: Laghachi na December
14: Kwuo Ugbu a
16: Onyinye Egwuregwu Billboard
19: Ụmụaka na-alụbeghị di (Tinye mgbanaka na ya)
20: Ntukwasi Nsukpo Teen Choice 2012
21: Ngwá Ahịa American Music 2015
25: Ntukwasi Nsukpo Teen Choice 2011
30: Republic Records
33: Ntukwasi Nsukpo Teen Choice 2013
41: Joey Eze
43: 39. Nhọrọ ndị mmadụ na-ahọrọ
44: Olileanya maka Haiti Ugbu a
48: iri ise nke ọchịchịrị (ihe nkiri)
Taylor Alison Swift (* 13 December 1989) bụ onye America, onye na-agụ egwú na onye na-agụ egwú. Ọ tolitere na Wyomissing, Pennsylvania, ma kwaga Nashville, Tennessee, ebe ọ malitere ọrụ egwu ya dịka onye na-agụ egwú. O tinyere aka na nkwekọrịta onwe ya bụ Big Machine Records wee ghọọ onye na-ede akwụkwọ na nwata kachasị na Sony / ATV Music Publishing. Ugbu a mgbe ọ hapụsịrị akwụkwọ mpịakọta mbụ ya (Taylor Swift) na 2006, ọ ghọrọ kpakpando nke mba ahụ. Onye nke atọ, "Our Song", mere ya ka ọ bụrụ ọbụ abụ nke kacha nta ka o dee abụ na-enweghị enyemaka ma wepụta abụ nke bu ụzọ na Billboard Hot Country Songs. Ọ natara Nhọrọ Grammy Award maka Best Artist Ọhụrụ na 2008.
Nke a bụ discography of American na-agụ egwú Taylor Swift.Do afọ 2013 26 ụwa ere karịrị otu nde albums. Na US, rere 22 nde albums na dere 51,1 nde digital ahịa nke ha albums na písní.AlbaStudiová albaKoncertní albaExtended playVideo alba2009: CMT crossroads: Taylor Swift na Def Leppard2011: Taylor Swift: Journey na FearlessSinglySolo singlyDuetyPropagační singlyDalší songs hitparádáchPísně nke na-enịm ke rankings billboard Hot 100, ma ọ bụghị singly.Fearless: "Ụzọ m hụrụ unu n'anya" (72. okporo ígwè), "Ruo Mgbe Ebighị Ebi & Always" (34.) "ima elu wee Fall" (10.) "Untouchable" (19.) "Bịanụ na na Rain "(30.)" Superstar "(26.)" The n'akụkụ nke ọzọ nke Door "(22.) Gwa Ugbu a" Ezigbo John "(54. nkebi)" Ọ dịghị mgbe Too Up "(84)." enchanted "(75.)" Mma Karịa ọbọ "(56)." Innocent "(27.)" anọgidewokwa na-anyụ "(63.)" Ikpeazụ Kiss "(71.)" Long Live "(85.)" Ọ bụrụ na nke a bụ a Movie "(10.)" Superman "(26.) Red:" m fọrọ nke nta ka "(65.)" All Oke Ọfọn "(80.)" Nọrọ Nọrọ Nọrọ "(91)." The oge m Maara '(64).
Onye na-atụ egwu bụ nke abụọ studio album nke onye America na-abụ abụ egwú bụ Taylor Swift. E wepụtara 11. November 2008 na Big Machine Records. The album debuted na US German 200, 592 304 ere mbipụta na ya nke mbụ ya izu na ghọrọ ndị kasị mma-ere album nke a nwaanyị na-agụ egwú na 2008 mbụ izu. CD-adịghị atụ egwu dị ka ndị mbụ nwee ike imeri fọrọ 1 000 000 mbipụta ere 2009, 1 500 000 si 1 mbipụta rere. Jenụwarị. The album anọ wɔfrɛ wɔn T na Top 10 - "Change" (10.) "Ịhụnanya Story" (4.) "Ịtụ Egwu" (9.) Ndien "Ị bụ nke m" (2.). The album nwekwara isii wɔfrɛ wɔn T na Top 20, na n'elu sonyeere "Ị bụghị Ndo" (11.) Ndien "White Horse" (13.). Ndị ọrụ gọọmentị ahụ ghọrọ ihe kacha njọ nke ọrụ Swift, na-enwe obi ụtọ ma ụlọ obibi ma n'ụwa nile. Achịkọ ahụ edebewo izu iri na otu na ndepụta Billboard 200.
1989 bu akwukwo ihe omimi nke ise nke mba ndi ohia amara nke obodo Taylor Swift weputara site na 27. October 2014. Nke a bụ nke mbụ ya dị ọcha, bụ nke sitere na egwú pop nke iri asatọ na narị afọ gara aga. The album emechala mba ndi na-egwu egwu egwu, nke amalitelarị na ufodu akuko nke Red album gara aga, na arusi arusi. Mgbanwe nke ụdị a bụ nke mbụ nke album "Shake It Off", bụ nke a kpọkọtara ọnụ mgbe ọ na-ebipụta ozi gbasara album 18. 2014, ma kwụọ izu na-esote n'elu chaatị Billboard Hot 100.
Red bụ nke anọ studio nke onye na-agụ egwú America bụ Taylor Swift. E dekọtara album ahụ na Big Machine Records na nke 22 wepụtara. October 2012. Akwukwo a sitere na ndi mmadu bu "anyi enweghi mgbe anyi biaghachi" ma "maliteghachi".
Taylor Swift si eponymous mpụta mbụ album na-agụ egwú. The album e wepụtara 24. October 2006.Seznam song Tim McGraw - 3: 54Picture Ọkụ - 2: 57Teardrops on My Guitar - 3: 37 Place na a World - 3: 24Cold ka Ị - 4: 03The n'èzí - 3: 31Tied Ọnụ na a Ọchị - 4: 13Stay Beautiful - 4: 00Mary si Song (Oh My My My) - 4: 06Should've Sị na Ọ dịghị - 3: 37Our Song - 3: 24Deluxe ediceTim McGraw - 3: 54Picture Ọkụ - 2: 57Teardrops on My Guitar - 3: 37 Place na a World - 3: 24Cold ka Ị - 4: 03The n'èzí - 3: 31Tied Ọnụ na a ọchị - 4: 13Stay Beautiful - 4: 00Mary si Song (Oh My My My) - 4: 06Should've Sị na Ọ dịghị - 3: 37Our song - 3: 24I'm naanị m mgbe m na-na na na - 3: 35Invisible - 3: 25 zuru okè Good Heart - 3: 42
Ntughari bu akwukwo onu nke isii nke onye egwu America Taylor Swift. E bipụtara na 10. November nke afọ 2017. Ntọala 23 kwupụtara ntọhapụ nke ọkpụkpọ ahụ. August nke afọ ahụ, mgbe e bipụtara nkwakọ ngwaahịa ya. Nke a bụ akwụkwọ mbụ ahụ kemgbe 2014, mgbe a tọhapụrụ 1989. Ruo oge ahụ, a na-agbanye akwụkwọ ya na afọ abụọ. Ed Sheeran na rapper Future pụtara na Taylor Swift si "Ọgwụgwụ Game" ndekọ.
Swift okwu (na English pụtara ngwa ngwa, nimble, agile) nwere ike iche iche ọ pụtara: People Swift - American rapper na so D12David Swift (* 1933) - British herecJonathan Swift (1667-1745) - Irish spisovatelLewis A. Swift (1820-1913 ) - American astronomEdward D. Swift (* 1871) - American-enyocha mbara igwe, nwa nke LA SwiftaTodd Swift (* 1966) - Canadian básníkTaylor Swift - American zpěvačkaDalší iji ngwa - otu maka n'ụwa nile interbank ego komunikaciSwift (oghere na Deimos) Swift (oghere na Moon) Swift (mmemme asụsụ) - mmemme asụsụ mepụtara AppleSWIFT (ntule usoro) - a usoro nke ozi na mgbasa ozi na ntule na Metro ụgbọ maka track megide n'elu ikpo okwu, kagbuo na January 2008Swift (web nchọgharị) - web nchọgharị maka Windows dabeere WebKituSuzuki Swift - ụdị onye Ọrụ ngwa ngwa - Ọrụ agha n'oge agha na V ietnamuSupermarine Swift - British ugboelu fighter akpa ọkara 50. ụgbọ elu 20. narị afọ
"M" bụ abụ nke onye na-agụ egwú egwú Latin Swift na-eme. Egwú ahụ si n'akwụkwọ nke atọ ya na-emepụta studio na-ekwu okwu ugbu a. Ihe ndị a gụnyere Nathan Chapman na Taylor Swift.
"Back to December" bụ abụ nke onye na-ede egwú na-abụ abụ na-abụ abụ Taylor Swift. Egwú ahụ si n'akwụkwọ nke atọ ya na-emepụta studio na-ekwu okwu ugbu a. Ihe ndị a gụnyere Nathan Chapman na Taylor Swift.
MTV EMA 2012 (a makwaara dị ka MTV Europe Music Awards) nwere 11. November 2012 na Frankfurt, Germany, na onye na-akwado mgbede bụ Heidi Klum. Ọ bụ nnọọ oge nke ise EMA kwadoro na Germany na nke ugboro abụọ obodo a ma ama bụ Frankfurt. Na 17. Septemba 2012, e bipụtara ọkwa. Rihanna nwetara ọkwa isii, Taylor Swift natara ọkwa ise.
Taylor Lautner (* 11. 1992 February, Grand Rapids, Michigan, United States) bụ American omee na-kasị ama maka ọrụ nke Jacob Black na film usoro Stmívání.Osobní životNarodil Deborah na Daniel Lautnerovým. Mgbe ọ bụ 6 afọ, o malitere karate. Ugbua na 8 afọ ọ na-anọchite anya mba ya ma na-emeri medal ọla edo atọ. Karate Fabiánová mụọ karate akwụkwọ. Mgbe ahụ, ọ gbakwara Mike Chat.
Max Martin, site na aha nne ya bụ Martin Karl Sandberg (* 26 February 1971, Stockholm) bụ onye na-ede egwú Swedish, onye na-eme ihe nkiri na onye na-agụ egwú. Dere wɔfrɛ wɔn T maka Backstreet Boys (m chọrọ ya na ụzọ), MNa na Magdolna (... Baby One More Time), Bon Jovi (Ọ bụ My Life), Katy Perry (m susuru a Girl), avril lavigne (Ihe Hell, ịmụmụ ọnụ ọchị, na-achọ ị nọ ebe a), Pink (ya mere, Gịnị) maroon 5 (One More Night), Taylor Swift (Anyị agaghị alaghachi Back Ọnụ, tichapụ Ọ Off, oghere Space, Bad Blood), Westlife, Celine Dion, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, The Veronicas, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Adele ma ọ bụ 'N Sync. O nwere songs 22 na Billboard Hot 100. Ọ meriri Grammy Awards atọ (2015 - Onye na-emepụta Afọ, 2016 - Best Pop Album na Album nke Year, nke abụọ bụ 1989 site na Taylor Swift).
Eponymous album (nakwa otu album nke otu aha) bụ ọba egwu egwu nke onye omenkà aha aha a ma ọ bụ aha onye na-egwu egwu. Mgbe mgbe, ọ bụ onye mbụ (a na-akpọ mpụta mbụ) album. Ihe atụ nke album nke a na-ebuteghị mbụ bụ Jenesis Jenesis, dịka ọmụmaatụ; nke ahụ bụ akwụkwọ iri na abụọ nke studio ha.
Na-ekwu Ugbu a bụ akwụkwọ nke atọ nke onye na-abụ abụ na onye na-ede egwú na Taylor Swift. E wepụtara 25. October 2010 site na Big Machine Records. A kwadebere album ahụ site na 2008 gaa 2010 na Swift na Nathan Chapman. Ọ bụ naanị onye ọbụ abụ dere abụ niile dị na album ahụ. Ihe ndekọ a na-egosipụta ụdị ọkpụkpọ na usoro egwuregwu maka ịhụnanya, ịhụnanya na obi mgbawa. Akwukwo a sitere na ndu onye ndu egwu, ihe ndi a na-akowara ya.
The 2015 Billboard Music Awards Awards ama ada itie ke 17. May 2015 na MGM Grand Garden Arena na Las Vegas. Ememe a na agbasa site na ABC. Ndị na-eme ihe ngosi na-achịkwa Ludacris na Chrissy Teigen.
Onyinye Egwuregwu Billboard bụ onyinye nke Americanboard magazin magazine Billboard nyere. A na-esi na 1989 gaa 2007 ahịa. Mgbe ọzọ ha malitere ruo na 2011.ProcesNa N'adịghị ka a Grammy ahịa, nke chọpụta nomination dị ka ọnụ ọgụgụ nke votes si National Academy nke ndekọ Arts na Sciences, na-nominated maka German Music Awards na-dabere na rankings, downloads na mkpokọta playability na redio.
Ndị na-atụ egwu enweghị ike ịbụ: Egwu (album, Taylor Swift) - album nke onye na-agụ egwú 2008Fearless Taylor Swift (album, Family) - 1971Fearless Records family album - Ụlọ ọrụ na-ebipụta egwu America
Burnin 'Up Tour bụ nke anọ Jason Brothers na-eme njem nleta. E kwesiri ka njem a na-akwado obere album nke obere obere obere oge. Njem a na-akwadokwa ihe nkiri Disney mbụ, Camp Rock, nke Jonas Brothers ji egwuri egwu. A na-ejikwa nlegharị ahụ na-akwado egwú Demi Lovato. Njem ahụ malitere na 4. July 2008. Ihe ngosi vidiyo 3D a na-akpọ Jonas Brothers: 3 tọhapụrụ 27D Ahụmahụ Concert. February 2009. E wepụtara ihe egwu egwu 24. February 2009. Avril lavigne, Demi Lovato, The Veronicas, Robert Schwartzman nke gbalaga Rooney na mba kpakpando Taylor Swift mere ka ọbịa nka on tour ọtụtụ ugboro na malitere Honor Society na dị ka a ọbịa Puerto Rico 22. March 2009. Taylor Swift ji abụ ya bụrụ "Ọ Kwesịrị Ịsị Mba," dị ka onye na-akụ na Jonas Brothers. Mkpokọta niile gara 41 nde dollar, maka ọrụ 48.
Ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye (etinye na mgbanaka na ya) bụ abụ nke onye Bekee Fernando Beyoncé Knowles si na ya album atọ, Abụ m ... Sasha Fierce. Ọ bụ 12 wepụtara abụ ahụ. October 2008 dị ka onye na-anya ụgbọelu. Onye na-emepụta Nrọ ahụ malitere ịkpụ abụ mgbe agbamakwụkwọ nzuzo nke Beyonce na di ya Jay-Z na April 2008. Onye na-emepụta ihe na-eme ka nsogbu ndị ikom na-adịghị achọ ịlụ di na nwunye nwee nsogbu. Onye na-abụ abụ gwara Billboard na ya nwere mmasị na isiokwu nke abụ ahụ n'ihi na ọ bụ nsogbu ọtụtụ ndị inyom na-edozi kwa ụbọchị.
A na-enye 2012 Awards Awards 22. July 2012 na agbasa ozi na TV Fox TV. Ndị na-eme mgbanwe n'afọ a aghọwo Demi Lovato na Kevin McHale. Onu ahia a mere ememe kachasi nke afo gara aga na egwu, ihe nkiri, telivishọn, egwuregwu, ejiji, ntochi na Intanet. Ndị nke afọ iri na ụma họọrọ site na iri afọ iri na atọ na iri na itoolu. N'afọ a, e dekọrọ nde votes votes 134.
Na 2015 American Music Awards weere na 22. November 2015 na Ụlọ Ngosi Ihe Nkiri Microsoft dị na Los Angeles, California. A na-agbasa usoro ahụ site na ABC ma kwuo ya site na Jennifer Lopez.
Egwú mba bụ ụdị egwu egwu America, mmalite nke ụbọchị ya na njedebe nke 18. narị afọ. 20 na 1920 bụ nke mbụ. narị afọ. Ọ bụ egwu nke Spanish, French na Irish si mba ọzọ na-emetụta ya.
Aha na aha nna Taylor [tejlr] ma ọ bụ Tylor nwere otutu mmadụ: Alan Taylor (1959) - American film director, emeputa ihe na scenáristaAngelo Taylor (1979) - American na-eme egwuregwu, na-eme egwuregwu, Olympic vítězArt Taylor (1929-1995) - American Jazz bubeníkBilly Taylor (1921-2010) - American Jazz pianist na skladatelBrenda Taylor (přechýleně Brenda Taylor) - ọzọ osobCecil Taylor (1929) - American pianist na skladatelCreed Taylor (1929) - American music producentDallas Taylor (1948-2014) - US hudebníkDon Taylor (1920 -1928) - American film režisérBrian Shaw-Taylor (1915-1999) - Irish ụgbọ ala závodníkBrook Taylor (1685-1731) - English mgbakọ na mwepụ, vědecCorey Taylor (1973) - American na-agụ egwú na hudebníkDallas Taylor (1948) - US bubeníkDave Taylor (1955) - Canadian hockey útočníkEdward Burnett Tylor (1832-1917) - British omenala ANTR opologElizabeth Taylor (1932-2011) - American herečkaFrederick Winslow Taylor (1856-1915) - Machinery inženýrGene Taylor (1952) - US pianistaHenry Taylor (1885-1951) - British-egwu mmiri, Olympic vítězHound Dog Taylor (1915-1975) - American blues guitarist na zpěvákCharles Taylor (ọkà ihe ọmụma) (1931) - Canadian ndọrọ ndọrọ ọchịchị filosofCharles Taylor (ndọrọ ndọrọ ọchịchị) (1948) - mbụ President LibérieChip Taylor (1940) - American na-agụ egwú na hudebníkChris Taylor - ọzọ osobChristian Taylor (1990) - American na-eme egwuregwu, trojskokanJames Taylor (* 1948 ) - American na-agụ egwú na kytaristaJennifer Bini Taylor (* 1972) - American herečkaJoseph Hooton Taylor (* 1941) - US radioastronomJoseph Lyle Taylor (* 1964) - US herecKarl Taylor Compton (1887-1954) - US fyzikKathrine Kressmann Taylor (1903-1996) - American spisovatelkaKenneth Taylor (1917-2005) - American ọkà mmụta okpukpe na spisovatelKoko Taylor (XN UMX-1928) - American zpěvačkaLarry Taylor (* 2009) - American bassist nwanne Mel TayloraLili Taylor (* 1942) - American herečkaMargaret Taylor (1967-1788) - nwunye President Zachary TayloraMel Taylor (1852-1933) - American musician, nwanne Larry TayloraMeshach Taylor (1996-1947) - US herecMick Taylor (* 2014) - English hudebníkMike Taylor (paleontologist) (1949) - British kọmputa programmer na paleontologMorgan Taylor (1968-1903) - American na-eme egwuregwu, Olympic vítězOtis Taylor (* 1975) - American blues musician
Uhie ma ọ bụ Red nwere ike na-egosi Red (osimiri) - red řekaRED - Random Early nchọpụta - random mbụ detekceRed (biya) - Lithuanian pivoFilmyRed (film 1970) - film si 1970 (Gilles Carle) Red (film 2002) - film afọ 2002 (Ram Sathya) Red (film, 2008) - nkiri nke afọ 2008 (Trygve Allister Diesen na kechioma McKee) Red (film, 2010) - nkiri nke afọ 2010 (Robert Schwentke) HudbaRed (album, King Crimson) - music album British gbalaga King CrimsonRed (album, Taylor Swift) - music album nke na-agụ egwú Taylor SwiftRed (gbalaga) - American Christian music skupinaLiteraturaReD - Czech avant-garde časopisExterní njikọ
A na-enye 2011 Awards Awards 7. August 2011 na agbasa ozi ọma na-ebi na TV Fox. Onye nhazi nke afọ a bụ Kaley Cuoco. Nke a bụ oge mbụ ndị ahịa a na-ebi ndụ kemgbe 2007.
Ryan Benjamin Tedder (* 26. 1979 June) bụ American dere na producent.Je maara dị ka na-edu ndú na-agụ egwú nke American pop oké nkume mmachi OneRepublic, nwekwara rụkọrọ ọrụ na ọtụtụ nka dị ka Madonna, U2, Adele, Beyonce Knowles, Birdy, maroon 5, Demi Lovato, Ellie Goulding, Bob, Ariana Grande, Kelly Clarkson, K'naan, Carrie Underwood, Jennifer Lopez, Jordin Edemede, Leona Lewis, Gavin DeGraw, Sebastian Ingrosso, mgbatị Class Heroes, One Direction, James Agụba, Taylor Swift, Gwen stefani, Far East Movement, Paul Oakenfold, na Ella Henderson, Zedd, Selena Gomez, Alesso, David Guetta.
Nickelodeon Kids 'Choice Awards ama ada itie ke 31. March 2012 na Galen Center na Los Angeles. Ọ bụ Will Smith kwadoro ememe ahụ. N'abalị, onye na-abụ egwú Katy Perry na One Direction rụrụ.
The 2016 Billboard Music Awards Awards ama ada itie ke 22. May 2016 na T-Mobile arena na Las Vegas. Ememe a na agbasa site na ABC. Ndị na-eme ihe ngosi na-achịkwa Ludacris na Ciara. 11 mara ọkwa ndị ahụ. April 2016. Weeked nwere ọtụtụ nhoputa na 20. Britney Spears natara onyinye onyinye nke Billboard Millennium. Celine Dion meriri onyinye onyinye ngosi Billboard.
MTV EMA 2017 (a makwaara dị ka MTV Europe Music Awards) mere na 12. November 2017 na Ụlọ Wembley na London, UK. Obodo United Kingdom kwadoro akara nke isii, na nke abụọ na London.
Republic Records bụ ụlọ ọrụ na-ebipụta egwu America nke bụ Group Music Group. Ọ bụ Monte Lipman na Avery Lipman hiwere aha na 1995. Na 1999, akara ahụ ghọrọ akụkụ nke Group Universal Motown Republic. Mgbe ịhapụhapụ Motown Records, a kwụsịrị Republic Records maka obere oge. Na 2006, ọ laghachiri dị ka Universal Republic Records na na 2012 ọ gbakee dị ka Republic Records.
Nickelodeon Kids 'Choice Awards ama ada itie ke 23. March 2013 na Galen Center na Los Angeles. Onye nhazi nke mgbede bụ omee Josh Duhamel. Onye na-eme ihe nkiri Pitbull rụrụ na onye na-abụ abụ Christina Aguilera na Kesha n'oge mgbede. Ntuli aka ntanetị malitere na 14. February 2013.
John Krovoza bụ onye American physist. N'afọ 1994 ruo 1997, ọ na-egwu Yannim onye Gris. Na 2006 ọ na-eme njem na Dixie Chicks. N'oge ya ọrụ o rụkọrọ ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ na egwú dị iche iche Genres, gụnyere Ray Charles, Taylor Swift, John Cale, Christina Aguilera, Kanye West, Barry Manilow, nyụrụ Anderson na gbalaga Black Light Burns na Belle na Sebastian. Ọ bụkwa onye òtù String Quartet String Quartet, bụ nke pụrụ iche na abụ dị iche iche nke ndị dị egwu Rock na Pop ndị dịka Nirvana, The Doors and The Killers.
NNNUMX Oria Nhọrọ Teen choputara na 2013. August 11 ma na-ebi ndụ site na ọdụ ụgbọelu US. Jiri kpọrọ bụ ndị si ubi nke music, film, telivishọn, egwuregwu, ejiji na Internet, na-eto eto ndị na-ekiri site 2013 ka 13 afọ. Nke a bụ ihe ikpeazụ nnyefe Teen Choice Awards ẹkenịmde ke Gibson ọgbọ egwuregwu, nke kemgbe September 19-e na The Wizarding World of Harry Potter (The kpokọtara World of Harry Potter). Ogologo ubochi: Nkọwa - 2013. akụkụ ahụ emeriwo asatọ n'ime ihe nnọchianya itoolu, obi ụtọ ndị mara mma emeriwo nhọpụta ha asaa, ihe ngosi ihe nkiri ahụ! zíslal anọ nke iri na otu Nhoputa, usoro isiokwu bụ ọṅụ merie anọ kwuo, nakwa dị ka Bruno Mars merie abụọ nke asatọ Nhoputa, Taylor Swift meriwo abụọ nke ya asaa Nhoputa, Demi Lovato merie anọ enọ, One Direction merie isii enọ (gụnyere ekwu ọnụ ahịa nke Harry Nye. Ya enọ Selena Gomez na Miley Cyrus meriri atọ n'ime ọkwa isii.
Nickelodeon Kids 'Choice Awards ama ada itie ke 27. March 2010 na Pauley Pavilion na Los Angeles. A na-eduzi onye na-eme ihe nkiri Kevin James. N'abalị, Miranda Cosgrove, Rihanna na Justin Bieber pụtara.
Owen Pallett, site n'aka onye a mụrụ Michael James Owen Pallett (* 7 September 1979) bụ onye na-egwu egwú, onye na-agụ egwú na ọtụtụ ndị na-ede egwú na Canada. O tinyewo egwu n'egwu kemgbe ọ bụ nwata; ọ malitere ịkpọ violin mgbe ọ dị afọ atọ ma dekọọ ihe mbụ dị na iri na atọ. Mgbe e mesịrị, ọ gụrụ na Haggis na Picastro na 2005 wepụtara aha mbụ ya, bụ Has and Good Home (n'okpuru aha Final Fantasy). N'oge ọrụ ya, ya na ọtụtụ ndị na-egwu egwu, dị ka Taylor Swift ma ọ bụ Linkin Park, National na Arcade Fire. E depụtara 2010 n'enweghị ihe ịga nke ọma maka Nrite Ahịa nke Ụlọ Akwụkwọ. Na 2014, a họpụtara ya maka Oscar maka Best Song maka Ya.
Megan Nicole Flores, mara dị ka Megan Nicole (* 1. 1993 September, Katy, Texas, USA) bụ American na-agụ egwú-songwriter, omee na nlereanya onye debuted na YouTube na 2009.Raný životNarodila na Houston, Texas. A na-akpọ nne na nna ya Tammy na Frankie Flores na o nwere nwanne nwanyị bụ Maddie Taylor. Ọ tolitere na Kata, Texas, ọ na-enwekwa mmasị n'ịkụ egwú kemgbe afọ iri ya mgbe nna ya zụtara karaoke. N'oge ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ bụkwa akụkụ nke otu òtù chọọchị.
Nickelodeon Kids 'Choice Awards ama ada itie ke 2. April 2011 na Galen Center dị na Los Angeles. Jack Black weghaara oge nke atọ. N'anyasị, Big Time Rush na Black Eyed Peas na onye na-abụ abụ Willow Smith rụrụ.
Billboard Hot 100 bụ ihe osise kachasị mma na United States. A na-ejikọta Hitparade kwa izu kemgbe 1941. Billboard Na mbụ Hot 100 #1 songs bụ abụ "Poor Little Fool" site n'aka Ricky Nelson si na 4. August, 1958.HistoryWhich a maara dị ka Hot 100, ọ dị afọ iri na ise gara aga n'ụdị chaatị dị iche iche. N'agbata afọ 1940 na afọ 1950, a na-egwu abụ ndị a ma ama na chaatị atọ.
Edward Christopher Sheeran (* 17 February 1991) bụ onye na-abụ Bekee na onye na-ede egwú na mgbọrọgwụ Irish. Mgbe ọ bụ nwata na Framlingham, England, 2008 gara London iji lekwasị anya na ọrụ ya. Na 2009 ọ na-akpọ 312 concerts na mmalite nke afọ 2011 wepụtara onwe ya EP na nnọchite nke Nke 1. 5 Collaborations Project, ekele maka Asylum / Atlantic Records label. A nabatara nlebara anya karịsịa maka ndị otu "The Team", "Lego House" na "M Lee Fire". A tọhapụrụ album + ya na 2011 wee nweta akara ngosi platinum na UK. N'afọ 2008, 2012 meriri abụọ BRIT Awards, onye ọbụ abụ kachasị mma na onye England nke afọ, ka abụ "The Team" gbaara onyinye Ivora Novella maka Abụ Ọma kachasị na Music na Text. Na 2014, kpọmkwem 23. 6., Weghaara ọkpụkpọ abụọ ya dị ka ×, bụrụ abụ abụ. Na 2015, o kere akwụkwọ egwu, nke bụ vidiyo vidiyo Ed, site na nwa ọhụrụ ruo ugbu a.
Serayah Ranee McNeill (* 20 June 1995, Encinitas, California, United States) bụ onye omeebe America, onye ọbụ abụ na ihe nlereanya. A maara nke ọma maka ọrụ nke Tianna Brown na nchịkọta Alaeze.
Joey Lynn King (* 30 July 1999, Los Angeles, California, United States) bụ onye omeebe America. Enye ama ọtọn̄ọde ke Ramona ye Beezus (2010), N̄kpọ, Damn Love (2011), 2017.
Ronan bụ nwoke aha nke Celtic si pụtara a obere akara. Irish okwu na-ewepụtara Ron, nke e kwukwara na suffix án.Známí ebu Ronan nke Locronan, na Irish senti nke 6. stoletíRonan Bennett, Irish spisovatelRonan Carolino Falcão, Ecuador fotbalistaRonan Farrow, ihe American onye edemede na aktivistaRonan Finn, Irish fotbalistaRonan Hardiman, Irish skladatelRonan Keane, Irish soudceRonan Keating, Irish zpěvákRonan Keenan, South African spisovatelRonan Lee, Australian politikRonan Mac Aodha Bhuí, Irish hlasatelRónán mac Colmáin, Irish králRónán Mullen, Irish politikRonan O'Brien, Irish spisovatelRonan O'Gara, na Irish rugbistaRonan O'Rahilly, ihe Irish obchodníkRonan Pensec, French cyklistaRonan Queiroz Brazil fotbalistaRonan Rafferty, Irish golfistaRonan Sheehan, Irish spisovatelRonan Thompson, ihe American ndị nwụrụ nke cancer na neuroblastoma isiokwu nke song "Ronan" si Taylor SwiftRonan Tynan, na Irish tenor na paralympionikRonan dị ka a aha nna Colin Ronan, British-enyocha mbara igwe na spisovatelDaniel Ronan, Ronan politikNiall American, Irish rugbistaSaoirse Ronan, Irish herečkaReferenceMiloslava Knapp, otú Bu de nwa akpọ? Mpụga Links
Akara Nhọrọ Ndị Mmadụ mere na 9. January 2013 na Nokia Theatre na Los Angeles, California. Nbudata CBS na Xbox Live bufere ya. Ọ bụ Kaley Cuoco na-eme ememe ahụ. A mara ọkwa nhọpụta aha na November nke 2012.
Olileanya maka Haiti Ugbu a: Uru zuru ezu maka Ala Ọma Jijiji bụ ihe nkiri bara uru iji nyere ndị ọdachi metụtara ala ahụ aka na Haiti, nke 23 nwere. January 2010 si 1 oge: 00 ka 3: 00 awa UTC, nke akwụ n'oge nnyefe iri nde pound na ndị ọzọ onyinye na-agba agba na na akaụntụ ahụ wee mgbe. Onye na-elekọta usoro ihe omume ahụ a na-akpọ "teleton" (onye na-ede ụda telivishọn na marathon) bụ onye nkiri George Clooney ma gaa karịa 100 ụwa.
Zach Gilford (* 14 January 1982, Evanston, Illinois) bụ ihe nkiri American na onye nkiri telivishọn. Ọrụ kachasị mara ya na nke kachasị na-aga nke ọma bụ usoro isiokwu ahụ, karịsịa ọrụ Matt Saracen na Friday Night Lights na Tommy Fuller si na map.
MTV EMA 2013 (a makwaara dị ka MTV Europe Music Awards) weere na 10. November 2013 na Ziggo Dome na Amsterdam, Netherlands. Nke a bụ oge mbụ kemgbe 1997, mgbe ha nọ na Netherlands.
Ụlọ Nzukọ Abụọ nke Songwriters bụ onyinye Egwuregwu American nyere site na National Academy of Music Popular. Johnny Mercer tọrọ ntọala na 1969, na ndị nkwusa Abe Olman na Howie Richmond. Na mgbakwunye na ndị na-ede egwú na isi ụdị, e nwere ọtụtụ onyinye pụrụ iche, dị ka onyinye Johnny Mercer, ma ọ bụ Sammy Cahn's Lifetime Achievement Award.
Ogologo ise nke ọchịchịrị (nke Bekee nke mbụ Fifty Shades Darker) bụ American erotic dramatic romantic film from 2017. El James dere otu isiokwu ahụ, di ya bụ Niall Leonard deere ihe nkiri ahụ maka ihe nkiri ahụ ma duzie James Foley. Ihe ngosi a bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ 50 Grades nke Grays. Dakota Johnson na Jamie Dornan na-ebute ụzọ ọzọ.
Hannah Montana: The Movie bụ aha nke ụda na ihe nkiri. Egwú a nwere songs 18, ụfọdụ n'ime ha toro, ọ bụghị abụ nile nke Miley Cyrus (Hannah Montana), ma ndị ọzọ. E bipụtara na 2009.